အချစ်နယ်ကျွံ (အသက် ၁၈နူစ်အောက်များ လုံးဝ မဖတ်ရူကြရန်): အိုးချင်းထား...အိုးချင်းထိ
သန်းထွန်းအောင် သည် ဆင့်ဆင့် သူတို့အိမ် ကို ရောက်လာပြီး နောက်.. သူတို့လင်မယား နှစ်ယောက်ထဲ နေနေတုံး ကလို မလွတ်လပ်တော့ဘူး လို့ ထင်မိ သည် ..။ ဆင့်ဆင့် သည် သူ့မိန်းမ ဝေေ၀လွင် ရဲ့ ညီမ တ၀မ်းကွဲ ဖြစ်သည် ..။ ဆင့်ဆင့် သည် လွန်ခဲ့တဲ့ တနှစ်လောက် ကမှ တရုံးထဲ လုပ်နေတဲ့ အရာရှိပေါက်စ ကိုဇော်ထိုက် နဲ့ အိမ်ထောင်ကျ သည် ..။
ကိုဇော်ထိုက် သည် ဆင့်ဆင့်နဲ့ အိမ်ထောင်ကျခါစ မှာ ရိုးရိုးအေးအေး နေနေခဲ့ပေမဲ့ ..တနှစ်လောက်လဲကြာရော အဖေါ်အပေါင်း နဲ့ သောက်တတ်စားတတ်လာ သည် ။
သူတို့ရုံးကလဲ အောက်ဆိုက် ရတဲ့ ရုံးဆိုတော့ ငွေ ရွှင် တာမို့ ညနေဘက် ရေချိန်ကိုက်ပြီး မှ အိမ်ပြန်လာလေ့ ရှိသည် ..။ ကိုဇော်ထိုက် ရဲ့ အခြေအနေ က အပျော်သောက်ရာကနေ တဖြေးဖြေး မသောက်ရရင် မနေနိုင်တဲ့ ယစ်ထုတ်ဘ၀ ကို ရောက်လာ သည် ..။ နေ့ရောညပါ ပုလင်းထောင်လာ သည် ..။
တဆင့်ပြီးတဆင့် ပိုပို ဆိုးဝါးလာ သည် ..။ အလုပ်ပျက်ရက်တွေ များလာ သည် ..။ မိန်းမ ဖြစ်တဲ့ ဆင့်ဆင့်
ကို ကိုယ်ထိလက်ရောက် လုပ်တာတွေ ဖြစ်လာ သည် ..။ မူးလာသောအခါ ဆင့်ဆင့်ကို ထိုးကြိတ်ကန်ကျောက် လာသည် ..။ ဆင့်ဆင့်မှာ လင်ဆိုးမယား တဖါးဖါး ဆိုသလို ငိုယိုနေရသည် ..။ နောက်ဆုံးတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်ပတ်လောက် မှာ ကိုဇော်ထိုက်အလုပ်ပြုတ်သွား သည် ..။
အလုပ်ပြုတ်သွား လဲ သူ့ အသောက် က မလျော့..။ သောက်လဲ သောက် မိန်းမ ကိုလဲ ရိုက်တော့ ဆင့်ဆင့် အိမ်ပေါ်က ဆင်းပြေးလာ သည် ..။ သန်းထွန်းအောင် နဲ့ ဝေေ၀လွင်တို့ အိမ် ကို ငိုယိုပြီး ရောက်လာသည် ..။ခဏ လာနေလို့ ရမလား ..မေးသည် ..။ ဝေေ၀လွင် က သနားတတ် သည် ..။ ဆင့်ဆင့် ကို သူတို့နဲ့ နေစေ သည် ..။
ကိုဇော်ထိုက် သန်းထွန်းအောင်တို့ အိမ်ကို လိုက်လာ သည် ..။ ကိုဇော်ထိုက် သည် ညစ်ပတ်ပေရေ ပြီး အရက်နံ့တွေ တထောင်းထောင်းနဲ့..။ လမ်းတောင်ကောင်းကောင်း မလျောက်နိုင် ..။တိုက်ပုံထဲ မှာ ပလပ်စတစ် အိပ် နဲ့ အရက် .. ပါလာ သည် ..။ အိမ်လှေခါး အတက် ..ပလပ်စတစ် အရက်အိပ် ဘုတ် ကနဲ ပြုတ်ကျသွားလို့ သိရတာ ..။
ကိုဇော်ထိုက် က မူးနေတော့ ရိုင်းရိုင်း စိုင်းစိုင်း ပြော သည် ..။ ဆင့်ဆင့် ကို ပြန်လာခေါ်တာ ..။ ငါ့မယား ငါလာခေါ်တာ ဘယ်သူ့ သောက်ဂရုစိုက်ရမလဲ ..ပြောလို့ သန်းထွန်းအောင် လဲ သူ့ကို ဆွဲမထိုးမိအောင် စိတ်ထိန်းထားရ သည် ။
“ကိုဇော်ထိုက်..ပြန်ရင်ကောင်းမယ် ...”လို့ ပြောလိုက် သည် ..။
ဆင့်ဆင့် က မလိုက်ဘူး ငြင်း သည် ..။ ကိုဇော်ထိုက် လဲ သန်းထွန်းအောင် မျက်နှာမာမာ နဲ့ ဘုကြည့်ကြည့်နေတာကြောင့် ရှေ့ဆက်မတိုးရဲဘဲ ပြန်သွား သည် ..။ သူ့မိန်းမ သူနဲ့ မလိုက်လို့ ကျေနပ်တာတော့ ဘယ်ကျေနပ် မလဲ ။ စောင်းငန်း စောင်းငန်းနဲ့ ပါးစပ်က ရေရွတ်ဆဲဆိုပြီး ပြန်သွားတာ ..။
ဆင့်ဆင့် သည် အလုပ်မှာလဲ ကိုဇော်ထိုက် လာနှောက်ရှက်မှာ စိုးလို့ ရုံးက ခွင့်ယူထား သည် ။ တရက် နှစ်ရက် ဆိုပြီး သန်းထွန်းအောင် နဲ့ ဝေေ၀လွင် တို့အိမ်မှာ လနဲ့ချီပြီး သောင်တင်နေ သည် ။ ဆင့်ဆင့်က အလိုက်သိတတ် သည် ။ အိမ်မှာ ၀ိုင်းလုပ် သည် ..။ ဆေးကြောချက်ပြုတ်ပေး သည် ..။ ဆင့်ဆင့် အိမ်မှာ ရှိတာသူတို့လင်မယားအတွက် ကောင်းတာတွေ က အများကြီး မို့ ဆင့်ဆင့် နေပါစေ လို့ ဝေေ၀လွင် က ခွင့်ပြု သည် ..။ ညဘက်ဆို ဆင့်ဆင့် နဲ့
ကိုရီးယား ကား ကြည့် သည် ..။ တချို့ညတွေမှာ နေကြာစိ စားရင်း စကားထိုင်ပြောကြ သည် ..။ ရုံးပိတ်ရက်တွေမှာ အထူး စပါယ်ရှယ် တခုခု ချက်စားကြသည် ..။
ဝေေ၀လွင် သည် ရေချိုးပြီးလို့ ထမိန်ရင်လျားနဲ့ သနပ်ခါးထိုင်သွေးနေသည် ..။ ဝေေ၀လွင့် စွင့်ကားတဲ့ တင်ပါးကြီးတွေကို ကုတင်ပေါ်ပက်လက် စာဖတ်နေသော သန်းထွန်းအောင် ကြည့်ပြီး စိတ်တွေ ထလာ သည် ..
“ ဝေ ..”
“ ဟင် .ကိုအောင်..ဘာလဲ ..”
“ ဝေ့ ဖင်က လှလိုက်တာ ..ကိုအောင်တို့ ချစ်ကြရအောင် ..”
“ ဟာ..ကိုအောင်ကလဲကွာ..တိုးတိုး . .ဆင့်ဆင့် ကြားသွားရင် မကောင်းပါဘူး . .”
“ ဝေကလဲ..ကိုအောင်တို့ မလုပ်ဖြစ်တာ ကြာနေပြီ ..လာပါကွာ ..ချစ်ကြရအောင် . . .”
“ တော်ကွာ ..ကိုအောင်..နှာဘူးမကျနဲ့..ဆင့်ဆင့် ရှိနေပါတယ် ဆိုမှ...”
သန်းထွန်းအောင် သည် ခါတိုင်းလို သူ့မိန်းမ ဝေေ၀လွင် ကို စိတ်တိုင်းကျ ဖြုတ်လို့ မရတော့လို့ စိတ်ပျက်နေ သည် ။
ဆင့်ဆင့် ရောက်ပြီး နောက်ပိုင်း ဝေေ၀လွင် က..ဆင့်ဆင့်ကြားသွားလိမ့်မယ် ဆိုပြီး သူ့ကို မပေးတော့ဘူး ။ ဆင့်ဆင့် မ၇ှိတဲ့ အချိန်မှာဘဲ ဝေေ၀လွင် ကို သူ လုပ်ရ သည် ..။ ဒါကြောင့် ဆင့်ဆင့် အိမ်မှာ လာနေခြင်း ကို သန်းထွန်းအောင် ငြူ စူမိ သည် ..။ ဝေေ၀လွင့်ကို ဆင့်ဆင့် မပြန်သေးဘူးလား..မေးမိ သည် ..။ ဝေေ၀လွင် က ခဏပါ
ဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူ ကို ကူညီကောင်းပါတယ် ..လို့ ပြောသည် ..။
ဆင့်ဆင့် သည် ပိန်ပိန်ပါးပါး နဲ့သိပ် အလှကြီး မဟုတ်သည့် ရွက်ကြမ်းရေကြို မိန်းမတယောက် ဘဲမို့ သန်းထွန်းအောင် သည် ဆင့်ဆင့်ကို သေသေချာချာ မကြည့်မိခဲ့ ..။ စိတ်မ၀င်စားခဲ့...။ ဒါပေမဲ့ ဒီနေ့ သူ အလုပ်က ပြန်လာတော့ ဝေေ၀လွင်လဲ ပြန်မရောက်သေးဘူး ..။ အိမ်ထဲ ရောက်ပြီး ရုံးဝတ်တဲ့ အ၀တ်အစားတွေ ချွတ် လိုက်ပြီး အိမ်နေရင်း..၀တ်လေ့ရှိတဲ့ စွပ်ကျယ်လက်ပြတ် နဲ့ ပုဆိုးအနွမ်း လဲဝတ်လိုက် သည် ..။ ဆင့်ဆင့်တော့ မတွေ့ဘူး ..။
နေ့လည်နေ့ခင်း အိမ်မှာ တယောက်ထဲ အားနေတော့ အိပ်များအိပ်နေသလား မသိဘူး ..။
ဘိုက်ဆာသလို ရှိတာနဲ့ ဘာများစားစရာရှိမလဲ ဆိုပြီး မီးဖိုချောင်ဘက် သွားကြည့်ရန် အိမ်အနောက်ထဲကို ၀င်လာတော့ ဟနေတဲ့ ဆင့်ဆင့် နေနေတဲ့ အိပ်ခန်းထဲ အမှတ်မထင် ကြည့်လိုက်မိ သည် ..။ သန်းထွန်းအောင် ပါးစပ် အဟောင်းသား ဖြစ်သွား သည် ..။ ဆင့်ဆင့်သည် ကုတင်ပေါ်မှာ အိပ်ပျော်နေတာ ထမိန်က ခါးမှာ ရောက်နေ သည် ..။ခါးအောက်ပိုင်း မှာ အ၀တ် မဲ့ နေ သည် ..။
ဖြူဝင်းသော ဆင့်ဆင့် ရဲ့ ၀မ်းဘိုက်သား..ပေါင်တန်နှစ်ဘက် နဲ့ ပေါင်ဂွဆုံနေရာ က အမွှေးမဲမဲ ခပ်ပါးပါး ပေါက်နေတဲ့ အင်္ဂါစပ်ကြီး ကို ရှင်းရှင်းကြီး တွေ့လိုက်ရလို့ပါ ..။
နီညိုညို အင်္ဂါစပ် အကွဲကြောင်းကြီး သည် ဖြူ ၀င်းသော ဆင့်ဆင့်ရဲ့ ဆီးခုံဖေါင်းဖေါင်းကြီးအလည်မှာ ထင်းထင်းကြီး တွေ့နေရ သည် ..။
သန်းထွန်းအောင် လဲ ကို ဆက်မလှမ်းဘဲ ဆင့်ဆင့် ကို အခန်းဝ ကနေ ငေးစိုက်ကြည့်နေမိ သည် ..။ နီညိုညို အဖုတ်အကွဲကြောင်းကြီး သည် တပ်မက်စရာကောင်းလှ သည် ..။ ခုတလော မိန်းမ ကိုလဲ မလုပ်ရတာ ကြာပြီ ဆိုတော့ စိတ်တွေက ထန်နေ သည် ..။ နှုတ်ခမ်းသား ထူထူ နဲ့ အဖုတ်ကြီး ကို သူ ငေးစိုက်ကြည့်နေမိ သည် ..။ သူ့ လိင်တန် က ထိန်းကနဲ မာကျောတောင်မတ် လာ သည် .။ ယောင်ယမ်းပြီး..သူ့အတန်ချောင်းကြီးကို ဖမ်းဆုတ်ကိုင်လိုက်မိ သည် ။
သန်းထွန်းအောင် ငေးစိုက်ကြည့်နေဆဲ ဆင့်ဆင့် သည် လူးလွန့်လာပြီး ပက်လက် အနေအထား ကနေ ဘေးတိုက်တစောင်း ကွေးကွေးလေး ဖြစ်သွား သည် ..။ ဖြူဖွေးတဲ့ တင်ပါးတွေ နဲ့ ပေါင်တန်ဖြူဖြူတွေ ကို မြင်တွေ့နေရ သည် ။
ဆင့်ဆင့် ရဲ့ အင်္ဂါစပ်ကြီး သည် အမြောင်းလိုက်ကြီး ဖင်နှစ်လုံးကြား က ပြူးထွက်နေ သည် ..။ ဆင့်ဆင့် ဖင်ကြီးတွေက လဲ အ ၀တ်မပါဘဲ တွေ့ရမှ တော်တော် တောင့် သည် ဆိုတာ သိလိုက်ရ သည် ..။
သန်းထွန်းအောင် လဲ ဆင့်ဆင့် အခန်းထဲ ကို ပြေးဝင်သွားပြီး တက် လုပ် လိုက်ချင်စိတ်တွေ တဖွားဖွား ပေါ်ပေါက်နေမိ သည် ..။ ပုဆိုးအပေါ်ကနေ ပေါင်ကြားက တောင်မာနေတဲ့ သူ့လိင်ချောင်းကြီးကို ဆုတ်ကိုင်ထားမိ ရသည် .။
အိမ်ရှေ့တံခါးပေါက် က သော့ဖွင့်လိုက်တဲ့ အသံကြားလိုက်ရတာကြောင့် သန်းထွန်းအောင် ဆင့်ဆင့်အခန်းရှေ့ကအမြန် ပြန်ပြေးထွက်ခဲ့ရ သည် ..။ သူ့မိန်းမ ဝေေ၀လွင် ပြန်လာတာ ဖြစ်နေ သည် . .။ ထိုနေ့ကစပြီး သန်းထွန်းအောင် သည် ဆင့်ဆင့် အိမ်မှာ လာနေတာကို အနှောက်အရှက် တခု လို့ မမြင်တော့..။ ဆင့်ဆင့်ကို မသိမသာ စိတ်ဝင်စား လာ သည် ..။ ဆင့်ဆင့်ရဲ့အတွင်းပစ္စည်းတွေ..ဘာများထပ်မြင်တွေ့နိုင်အံးမလဲ စိတ်ဝင်စားလာ သည် ..။ ဝေေ၀လွင်ကို နှူးနှပ်ပြီး ကာမဆက်ဆံ သောအခါ တဖက်ခန်းမှာ ဆင့်ဆင့် ရှိနေတာကို သိပြီး ဆင့်ဆင့် ကြားရအောင် အသံဗလံတွေ လုပ်မိ သည် ..။ ဆင့်ဆင့်များ နားစွင့်နေမလား..ဆင့်ဆင့်များ ချောင်းကြည့်နေမလား ဆိုတာ လဲ သူ တွေးနေမိပြီး ဝေေ၀လွင် ကို စပ်ရှက်ရတာ ပိုပြီး စိတ်လှုပ်ရှားရသလို ဘဲ ..။
ဝေေ၀လွင် သည် ဆင့်ဆင့် ရောက်လာခါစ က ဆင့်ဆင့် ရှိနေလို့ သန်းထွန်းအောင် က ကာမ ဆက်ဆံဖို့ ကြိုးစားရင် ညင်းပယ်တတ်ပေမဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ..ဆင့်ဆင့်က ရေရှည်နေမဲ့သူ ဖြစ်လာပြီး သန်းထွန်းအောင် က ပွတ်သီးပွတ်သပ် ဟိုကိုင်ဒီနှိုက် နဲ့ နှူးနှပ်လာသောအခါ သူမစ်ိတ်တွေလဲ ထကြွလာရပြီး သန်းထွန်းအောင် နဲ့ လုပ်ဖြစ်ကြ သည် ..။
ဝေေ၀လွင်နဲ့ လုပ်ကြတဲ့ အချိန် အသံမမြည်အောင် ထိန်းတဲ့ကြားက ထွက်လာတဲ့ ဆင့်ဆင့်တယောက် ကြားမှာဘဲ လို့လဲ တွေးနေသည် ..။ ဆင့်ဆင့် ဒီလို အသံတွေ ကြားရလို့ စိတ်တွေ ထကြွလေမလား ..။ ဆင့်ဆင့်များ သူတို့ကို ချောင်းမလား ဆိုပြီး အိပ်ခန်းတံခါး ကိုတောင် ဟထားတတ် သည် . .။
သူကကိုယ် က သတိထား ချောင်းမြောင်းနေတာကြောင့် ဆင့်ဆင့် မီးဖိုချောင်မှာ ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်ပြီး ငရုတ်သီး
ထောင်းနေချိန် ထမိန်အောက်စလွတ်ပြီး အဖုတ်အကွဲကြောင်း ပေါ်နေတာတွေ..ဆင့်ဆင့် ထမိန်ပြင်ဝတ် တဲ့အခါ လျပ်
တပျက် ဆင့်ဆင့် ၀မ်းပျင်သားဖြူဖြူ ချပ်ချပ် နဲ့ အဲဒီအောက် က အမွှေးမဲမဲတွေ ကို မြင်လိုက်ရတာတွေ ကြောင့် သူ့
စိတ်တွေ ထကြွပြီး ဆင့်ဆင့်ကို ရနိုင်မယ် ဆိုရင် ဖြုတ်ချင် စိတ်တွေ တဖွားဖွား ပေါ်ပေါက်နေပေ သည် ။
ဆင့်ဆင့် သည် ဝေေ၀လွင် နဲ့ သန်းထွန်းအောင် တို့ အိမ်မှာ တဖြေးဖြေး အနေကြာလာ သည် ..။ ကိုဇော်ထိုက် ကို
တော့ ဆင့်ဆင့် ပြန်မပေါင်း ချင်တော့ဘူး ..လို့ ပြောသည် ။ ကိုဇော်ထိုက် သည် ပိုပို ဆိုးလာ သည် ..။ အလုပ်လက်မဲ့ အရက်သမားမို့ အရင်ဆုံး အိမ်ရှိ အဖိုးတန် ပစ္စည်းတွေ ကို ထုခွဲရောင်းချပြီး အရက်သောက်ပစ် သည် ..။ ရောင်းချစရာမရှိသောအခါ အိမ်ထောင်ပရိဘာဂတွေ ကို ရောင်းချကာ ဆက်သောက်သည် ..။ အသိအကျွမ်း ဆွေမျိုးတွေ ဆီက အရှက်မရှိ လိုက်တောင်း သည် ..။ ချေး သည် ..။ သောက် တာကတော့ နေ့ရောညရော..။ အရက်ဆိုင်တွေရှေ့ ပလက်ဖေါင်းပေါ်လဲနေတာ..မှောက်နေတာ တွေ့နေကြရ သည် ..။
ဆင့်ဆင့် သည် ညဘက် တဖက်ခန်း က သန်းထွန်းအောင် နဲ့ ဝေေ၀လွင်တို့ ချစ်တင်းနှီးနှောတဲ့ ကာမဆက်ဆံတဲ့
( လိုးကြတဲ့ ) အသံဘလံတွေ ကို ကြားကြားနေရတာကြောင့် လင် နဲ့ ဝေးကွာပြီး ကာမစပ်ရှက်တာ နဲ့ ကင်းဝေးနေတာ ကြာလို့ ကာမစိတ်တွေ နိုးကြားဖေါက်ပြန်မိရ သည် ..။
တဖက်ခန်း က လင်မယား ကလဲ ဘာကြမ်းသလဲ မမေးနဲ့ ..။ အသံတွေ အတိုင်းသား ကြားကြားနေရ သည် ..။ ကုတင် တကျွိကျွိ မြည် ပြီး နံရံ နဲ့ တဒုတ်တဒုတ် ထိရိုက်တဲ့ အသံတွေကြားနေရ သည် ..။ ဆင့်ဆင့် ဒီအသံတွေ ကြောင့် စိတ်တွေရွထပြီး အိပ်လို့ မပျော်ဘဲ ကာမစိတ်တွေ ပြင်းထန်စွာဖြစ်ပေါ်ရပြီး သန်းထွန်းအောင် နဲ့ ဝေေ၀လွင်တို့ စပ်ရှက်တာတွေကိုလဲ တွေ့ချင်မြင်ချင်စိတ်တွေ လဲ တားမရဆီးမရဖြစ်နေရသည် ..။ သူတို့ လင်မယား လုပ်ကြတိုင်း ဆင့်ဆင့်မှာ တဏှာစိတ်တွေ ကြွရွနေရပြီး ယောင်္ကျားတယောက်ရဲ့စပ်၇ှက်တာကို ခံလိုစိတ်တွေ ပြင်းပြနေပေ သည် ..။
တဖက်ခန်း က သန်းထွန်းအောင် နဲ့ ဝေေ၀လွင်တို့ တဖွတ်ဖွတ်တဖပ်ဖပ် လုပ်ကိုင်နေကြသံတွေ ကိုနားစိုက်ထောင်နေမိ သည် ..။ ပေါင်ကြားက မိမိ အဖုတ်ထဲက ယားယံတဲ့ဝေဒနာကြောင့် လက်နဲ့ အဖုတ်ကို ပွတ်သပ်နေမိသည် ..။ အရေတွေ တအားစိုပေနေတာ တွေ့ရသည် ..။ မိမိ အစိကို ဖိဖိပွတ်နေမိချိန် တဖက်ခန်း က
ဝေေ၀လွင်ရဲ့ ညည်းသံ အော်သံတွေ ကို တဖတ်ဖတ်သံတွေ နဲ့ အတူ ကြားနေရပြန် သည် ..။
သန်းထွန်းအောင် ရဲ့ ဆောင့်ချက်တွေကလဲ ဘာပြင်းသလဲ မမေးနဲ့ ..။ တဒိုင်းဒိုင်း နဲ့..။
ဝေေ၀လွင်ရဲ့ ညည်းသံတွေ ကလဲ တိတ်ဆိတ်နေတဲ့ ညအချိန်မှာ သိသိသာသာကြီး ကြားနေရသည် ..။
ဆင့်ဆင့် လဲ ရင်သားတွေ က ယားယံသလိုလို နို့သီးခေါင်းတွေက တင်းမာသလိုလို ဖြစ်နေတာမို့ အဖုတ်ကို လက်တဖက် နဲ့ ပွတ်ချေနေသလို ကျန်တဲ့လက်နဲ့ နို့သီးခေါင်းလေးတွေ ကို ချေပွတ်နေမိ သည် ..။
ခဏကြာတော့ သူတို့ လင်မယား ပွဲသိမ်းသွားပုံရ သည် ..။အသံဘလံတွေ တိတ်သွား သည် ..။ ဆင့်ဆင့် လဲ မိမိ ဖါသာ အာသာဖြေတာ ထမိန်တွေလဲ ပေစိုကွက်နေသလို လက်တွေ လဲ ပေရေနေပြီး ..ဆေးကြောလိုစိတ် ဖြစ်လာတာကြောင့် အိမ်နောက်ဖေးက ရေချိုးခန်း ကို ထွက်ခဲ့ သည် ..။
လင်ရှိပြီးမှ အပျိုဖျန်းမ တယောက်လို ကိုယ့်ဖါသာ အာသာဖြေနေရတဲ့ မိမိအဖြစ်ကို စိတ်ပျက်မိ သည် ..။ ဘိုက်ဆာရင် ထစားလိုက်သလိုဘဲ စောက်ပတ်ယားရင် အလိုးကောင်းတဲ့ ယောင်္ကျားတယောက် ရဲ့ ပီပီပြင်ပြင် လုပ်ပေးတာကို ခံပစ်လိုက်ချင်သည် ..။ ယောင်္ကျား လုပ်တာကို မခံရတာ ကြာလာပြီ မဟုတ်လား ..။
ရေချိုးခန်း ထဲ ၀င်ပြီး မီးခလုပ်ကို ခြောက်ကနဲ နှိပ်ဖွင့်လိုက်သော အခါ အမှောင်ထဲ ကိုယ်တုံးလုံးကြီး နဲ့ သေးပန်းနေတဲ့သန်းထွန်းအောင် ကို ရုတ်တရက် မြင်လိုက်ရလေ သည် ..။
သန်းထွန်းအောင်မှာလဲ ပွဲကြမ်းပြီးခါစ ငေါငေါကြီး ဖြစ်နေဆဲ သူ့လိင်တန်ချောင်းကြီး နဲ့ အိမ်သာခွက်ထဲ ကို သေးပန်းနေရင်း မီးခလုပ်နှိပ်ဖွင့်လိုက် တဲ့ ဆင့်ဆင့်ကို ပြုံးပြုံးကြီး ကြည့်နေ သည် ..။ ဆင့်ဆင့်မှာလဲ သူ့လိင်တန်ကြီး ကို စူးစိုက်ငေးကြည့်နေမိ သည် ..။ ညိုညိုတုတ်တုတ် လိင်တန်ကြီး ကို မြင်လိုက်ရတော့ ကြက်သီးတွေ တဖျန်းဖျန်း ထသွားရ သည် ..။ ဒစ်ပြဲကြီး ကို မြင်ရတာ မျက်လုံး မခွာတမ်း စိုက်ကြည့်နေမိပြီ...။
သန်းထွန်းအောင် က သေးပေါက်ပြီးသွားလို့ ဆင့်ဆငိ့ ဖက်ကို ပြန်လှည့်လိုက်သောအခါ ပေါင်ကြား အမွှေးမဲမဲတွေကြားက လုံးပတ်တုတ်ပြီး ရှည်သော လိင်တန် ညိုညိုကြီး ကို အသဲယားစရာ အနီးကပ် တွေ့လိုက်ရ သည် ..။
သန်းထွန်းအောင် လဲ ဆင့်ဆင့် ထမိန်မှာ စိုပေကွက်နေတာတွေ ကို တွေ့လိုက်ရ သည် ..။ သူတို့ လင်မယား တအား
ဗြုံးကြတာ ဆင့်ဆင့်ကြားပြီး စိတ်တွေ ထကြွတာ ဖြစ်မည်လို့ သူ တထစ်ချ တွက်ဆလိုက် သည် ..။
သူ့မိန်းမ ဝေေ၀လွင် လဲ ပွဲသိမ်းအပြီး တခေါခေါ နဲ့ အိပ်သွားပြီမို့ သူ တိတ်တခိုး ပြစ်မှားနေတဲ့ ဆင့်ဆင့်ကို
အခုလို ညသန်းကောင်ကျော် အချိန် နှစ်ယောက်ထဲ ရေချိုးခန်းထဲ ဆုံလိုက်သောအခါ စိတ်မထိန်းနိုင်တော့ဘဲ ဆင့်ဆင့် ကို ဆွဲဖက်ကာ နမ်းမိလေပြီ ..။
ဆင့်ဆင့်လဲ သန်းထွန်းအောင် က ရုတ်တရက် ဆွဲဖက်ခါ နမ်းသောအခါ ကြောက်လန့်တကြား ရုန်းဖယ်ဖို့ ကြိုးစားသည် ..။ သန်းထွန်းအောင်ရဲ့ သန်မာတဲ့ လက်ကြီးတွေ နဲ့ တအား ဆွဲဖက် ထားတာကို ဆင့်ဆင့် ရုန်းထွက်လို့ မရနိုင်ဘူး ..။
“ လွှတ်..လွှတ်ပါ အကို ..မတော်ပါဘူး ...”
သန်းထွန်းအောင် က သူ့နှုတ်ခမ်းမှာ လက်ညှိုး ထောင်ကပ်ပြီး ..အသံမပြုဖို့ တားလိုက် သည် ..။
ဆင့်ဆင့် ရဲ့ နှုတ်ခမ်းထူထူလေးတွေ ကို ငုံစုတ်လိုက်တော့ ဆင့်ဆင့် မျက်လုံးလေးတွေ မှေးစင်းကျသွား သည် ..။
စောစော က ငေါငေါကြီး ရှိနေတဲ့ သန်းထွန်းအောင် ရဲ့ လိင်တန်ကြီးလဲ တမဟုတ်ချင်း ဒေါင်းကနဲ တောင်မာ ထောင်ထလာပြီး ဆင့်ဆင့်ပေါင်ကြား ကို ထိုးထောက်လာ သည် ..။
သန်းထွန်းအောင်ရဲ့ လျာကြီးက ဆင့်ဆင့် ပါးစပ်လေးထဲ ထိုးကလိမွှေနေသောအခါ ဆင့်ဆင့် ရဲ့ တွန်းဖယ်
နေတဲ့ လက်တွေဟာ သန်းထွန်းအောင် ရဲ့ ကျောပြင်ကြီး ကို ဖက်သိုင်းလာလေ သည် ..။ သန်းထွန်းအောင် ရဲ့ ဆင့်ဆင့် ခါးသိမ်လေး ကို ဆွဲဖက်ထားတဲ့ လက်တွေဟာလဲ ဆင့်ဆင့် စွင့်ကားတဲ့ တင်ပါးကြီးတွေ ပေါ်ကို ရောက်ရှိသွားပြီး ပွတ်သပ်ကိုင်တွယ်နေ သည် ..။
ဆင့်ဆင့် လဲ ဘယ်လောက်အထိ မိန်းမူးသွားသလဲ မသိတော့ ..။ သူမ ကိုယ် အထက်ပိုင်းဗလာကျင်းလို့ ကျင်းမှန်း မသိတော့ ..။ သန်းထွန်းအောင် သည် သူမ ရင်သားတွေ ကို နမ်းရှုံ့ကာ နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို စို့ပေးနေ သည် ..။ ဆင့်ဆင့် သည် သန်းထွန်းအောင် ပြုသမျှကို သူ့ကို တအား ပြန် ဖက်တွယ်ကာ ခံယူနေမိ သည် ..။
သန်းထွန်းအောင် ရဲ့ လက်ချောင်းတွေ လဲ ဆင့်ဆင့်ရဲ့ အရေတွေ တအားစိုရွှဲနေတဲ့ အဖုတ်ကြီး ကို ကိုင်တွယ်နေ သည် ..။ အဖုတ် အထဲကို သူ့လက်ညှိုး နဲ့ နှိုက် သည် ..။ အို..အင်..အင်.....အကို့ ….
ဆင့်ဆင့် သည် ကာမစိတ်တွေ တအား ပြင်းပြနေပြီမို့ နောက်တဆင့်တက်ခါ သူမကို ဗြုန်း ဖို့ လုပ်တော့မည် လို့ ပြင်ဆင်ခိုက် သူတို့ အိပ်ခန်းထဲမှ မိန်းမဖြစ်သူ ဝေေ၀လွင် ရဲ့ အသံကို ကြားလိုက်ရ သည် ။
“ ကိုအောင်..ကိုအောင် ...ဘယ်ရောက်သွားတာလဲ ...”
သန်းထွန်းအောင် လဲ သတိဝင်လာပြီး ...“ ကိုယ် အိမ်သာတက်နေတယ်..ဝေ ..ဘာလိုချင်လဲ ...” လို့ ပြန်အော်ပြောလိုက် သည် ..။ ဆင့်ဆင့်လဲ လန့်ဖျန့်ကာ သန်းထွန်းအောင် ရင်ခွင်ထဲက ရုန်းထွက်လိုက် သည် ..။ သန်းထွန်းအောင်လဲ ဝေေ၀လွင် အိပ်ခန်းထဲက ထွက်မလာခင် ဆင့်ဆင့်ကို ရေချိုးခန်းထဲ ထားခဲ့ကာ အိပ်ခန်းဆီကို ပြန်လျောက်သွားသည် ..။ ဆင့်ဆင့်လဲ ရေချိုးခန်းထဲမှာ နံရံကို ကျောမှီကာ ရင်တွေ တုန်ပြီး ကျန်ခဲ့ သည် ..။
သန်းထွန်းအောင် ရဲ့ အကိုင်အတွယ် အထိအတွေ့တွေ ကို ဆင့်ဆင့် တချိန်လုံး သတိရနေသည် ..။ ညက ရေချိုးခန်း
ထဲမှာ သန်းထွန်းအောင် နဲ့ အရှိန်တက်လာပြီး အလုပ်ဖြစ်ခါနီး ဝေေ၀လွင် အော်ခေါ်လိုက်လို့ သန်းထွန်းအောင် အိပ်ခန်းထဲ ပြန်ဝင်သွားရ သည် ..။
အလုပ် ကို ရောက်တော့လဲ သန်းထွန်းအောင်ရဲ့ လိင်တန်ချောင်းကြီး ကို ပြန်မြင်ယောင်နေ သည် ..။ မနက်က
အလုပ်သွားခါနီး ဝေေ၀လွင် အလစ်မှာ သန်းထွန်းအောင်က ထမင်းဘူး ထည့်နေတဲ့ ဆင့်ဆင့်အနားကို ကပ်လာပြီး..
ဆင့်ဆင့် တင်ပါးကြီးတွေကို တအား ဆုတ်ညှစ်သေးသည် ..။ ဆင့်ဆင့်လဲ...“နောက်မှအကို...မဝေတွေ့သွားမယ် ...”ဆိုပြီး သူ့ကို တွန်းလွှတ်ပစ်ရ သည် ..။ ဒီအတိုင်း ဆိုရင်
သူနဲ့ ဆင့်ဆင့်တို့ ပွဲကြီးးပွဲကောင်း ဘဲ ...။
သန်းထွန်းအောင် သည် ဆင့်ဆင့်ကို တအား ဖြူတ်ချင်နေသည် ..။
ညက ရေချိုးခန်းထဲမှာ ဖြုတ်ရပြီ ထင်တာ ..။ ဝေေ၀လွင် အော်ခေါ်လို့ မဖြုတ်ဖြစ်လိုက် ..။ မနက် က ထမင်းဘူး ထည့်
နေတဲ့ ဆင့်ဆင့်ကို မီးဖိုခန်းထဲ ဖက်နမ်းပြီး သူမဖင်ကြီးတွေကို ဆုတ်ကိုင်ဖျစ်ညှစ် ခဲ့ သည် ..။ ဆင့်ဆင့်ကိုမြင်ယောင်ပြီး စိတ်တွေ ထကြွနေလို့ အလုပ်စားပွဲမှာ ထိုင်နေတုံး သူ့လိင်တန်က တင်းမာပြီး ထောင်နေရ
သည် ..။ သူ့စားပွဲပေါ်က ဖုန်းမြည်လာ သည် ..။ ဟလို ..အမိန့်ရှိပါ ...သန်းထွန်းအောင် ပါ ...”
“ဟေ့ သူငယ်ချင်း ..ငါပါ ..မျိုးသန်းခိုင် ...”
“ ဟာ..မျိုးကြီး ..ဘယ်လိုလဲ..မတွေ့တာ ကြာပြီ ..”
“ အေး...ညနေအားလား ...ဘီယာချမယ်လေ ...”
“ အေး...ချတာပေါ့..မျိုးကြီး ..မင်းကို ငါ တွေ့ချင်နေတာ …. ”
“ ငါလဲ မင်းကိုတွေ့ချင်နေတာပါဘဲ သန်းထွန်းအောင် ရာ..ဆွေဆွေ ကတောင် မင်းကို ထမင်းလာစားဖို့ အမြဲ ခေါ်ခိုင်း
တာ ..ကဲ..ဒါဆို ညနေကျ ဆုံမယ် ...”
“ ဘယ်မှာလဲ ..”
“ဒို့သွားဘူးတဲ့ ပြုံးပန်းတရာ ပေါ့...”
“ ကောင်းပြီ သူငယ်ချင်း ...”
ညနေရုံးဆင်းခါနီး မျိုးကြီးနဲ့ ဘီယာသွားသောက်မဲ့အကြောင်း ဝေေ၀လွင့်ကို ပြောအုံးမှဘဲ ဆိုပြီး ဖုန်းဆက်ဖို့ ကြံ
ရွယ်တုံး ..ဝေေ၀လွင့်ဆီက ဖုန်းဆက်လာ သည် ..။
“ကိုအောင် ..ဝေ နွယ်နီတို့နဲ့လိုက်သွားမလို့ ..အိမ်ပြန်နောက်ကျမယ် ..ထမင်းစားနှင့်တော့..ဝေ နွယ်နီတို့ နဲ့ဘဲ ညစာ စားလိုက်မှာ...”
“ ကောင်းပြီ ဝေ ..ကိုယ်လဲ မျိုးကြီး နဲ့ ချိန်းထားလို့ ချက်ချင်း အိမ်ပြန်ဖြစ်မှာ မဟုတ်သေးဘူး ...”
“ ဆင့်ဆင့်ကိုလဲ ဝေ အပြန်နောက်ကျမဲ့အကြောင်း ပြောပြလိုက်အုံး...ဟင်းလဲ ချန်မနေနဲ့လို့ ..”
“ ပြုံးပန်းတရာ ” မှာ မျိုးကြီး နဲ့ စကားတပြောပြောနဲ့ ဘီယာသောက်ကြသည် ..။ အကင်စုံ စားရင်း ကျောင်းတုံးက အကြောင်းတွေ..ငယ်သူငယ်ချင်းတွေ ရဲ့ အကြောင်းတွေ ပြောဖြစ်ကြ သည် ..။ မျိုးကြီး နဲ့ သန်းထွန်းအောင်သည် ကျောင်းမှာတုံးက အရမ်းခင် အမြဲတွဲသော သူငယ်ချင်းတွေ ဖြစ် သည် ..။ ဘွဲ့ရပြီး အလုပ်ခွင်တွေ ၀င်ကြတော့တယောက် နဲ့တယောက် အရင်ကလောက် မတွေ့ဖြစ်ကြတော့ ..။
မျိုးကြီး က ဆွေဆွေ နဲ့ ကျောင်းနေတုံးကထဲက အိမ်ထောင်ကျ သည် ..။ အခု သူတို့ သမီးလေး သွန်းဆု တောင် အပျိုမလေး ဖြစ်နေပြီ ..။ မျိုးကြီး အိမ်မှာ အရင်က ညစာသွားစားတတ်..ဘီယာသွားသောက် တတ်ခဲ့ပေမဲ့ သူ မရောက်ဖြစ်တာ ကြာပြီ ..။ ဝေေ၀လွင် က ဘိုက်ရွှဲလာမည် ဆိုပြီး ဘီယာ သောက်တာကို တားမြစ်တာကြောင့်လဲ မျိုးကြီး နဲ့ ဘီယာမသောက်ဖြစ်တော့ ..။
အိမ်ရှေ့အထိ မျိုးကြီး လိုက်ပို့ပေး သည် ..။ မျိုးကြီး ရဲ့ အလုပ်က အောက်ဆိုက် ၀င်တဲ့ အလုပ်မို့ အခုလို တိုက်နိုင်ကျွေးနိုင်တာ ..။ မျိုးကြီး ကို နုတ်ဆက်ပြီး အိမ်ပေါ်တက် သည် ..။ ဆင့်ဆင့်က တံခါးဖွင့်ပေးသည် . အကို ..မဝေ အပြန်နောက်ကျမယ်..တဲ့..”
“ ဝေ ဖုန်းဆက်သေးလား...”
“ ဟုတ်တယ် အကို ..”
အ၀တ်အစားတွေ ချွတ်ပြီး အိမ်နေရင်း စွပ်ကျယ်နဲ့ ပုဆိုးအဟောင်း တထည် ကောက်ဝတ်လိုက်တုံး..တအိမ်လုံး ဆင့်ဆင့် နဲ့ သူ နှစ်ယောက်ထဲ ဆိုတာ သတိရပြီး စိတ်တွေ ထကြွ လာ သည် ..။ အိပ်ခန်းထဲ က အထွက် ဆင့်ဆင့်နဲ့ အိမ်နောက်ဖေး ကို သွားတဲ့ လမ်းကြားလေးမှာ ဆုံ သည် ..။
“ ဆင့်ဆင့် ...”
“ ရှင်..အကို ...”
“ လာအုံး..ဒီကို ...”
ဆင့်ဆင့် ခါးလေး ကနေဆွဲဖက်လိုက် သည် ..။ “ အကို...ဘာလဲလို့ ..” ဆင့်ဆင့်က ညုတုတု နဲ့ သူ့ရင်ခွင်ထဲကိုရောက်လာ သည် ..။ အိုး ...ဆင့်ဆင့် ရင်သားစိုင်တွေ အိကနဲ သူ့ရင်ဘတ် ကို ဖိကပ်မိသွား သည် ..။ ဆင့်ဆင့်ဘရာစီယာ ခံဝတ်မထား တာ သတိပြုမိလိုက် သည် ..။
“အကို..မဝေ ပြန်လာလို့ တွေ့သွားမှ ဖြင့်..ဟုတ်ပေ့ဖြစ်သွားမယ် ...”
“ မလာသေးပါဘူး..ညဉ့်နက်မှာပါ ...”
“ နောက်မှ အကိုရယ် ..”
“ ဟင့်အင်း ..မစောင့်နိုင်ဘူး ဆင့်ရယ် . .”
ဆင့်ဆင့် ရဲ့ နှုတ်ခမ်းဖေါင်းဖေါင်းလေး ကို ငုံစုတ်လိုက် သည် ..။ ဆင့်ဆင့် မျက်တောင်လေးတွေ မှေးစင်းကျသွားပြီးသူ့ကို ပြန်ဖက်ရင်း တုံ့ပြန်ပြီး စုတ်နမ်းလာ သည် ..။
အနမ်းတွေက စစချင်းမှာ သိမ်သိမ်မွေ့မွေ့ စပေမဲ့ တဖြေးဖြေးနဲ့ ကြမ်းလာ သည် ..။ အသက်ရှူသံတွေ မြန်လာသည် ။
ဆင့်ဆင့်က နှုတ်ခမ်းတွေ ကွာအသွား..“ အိပ်ခန်းထဲ သွားကြရအောင်..အကိုရယ် ..” လို့ပြော သည် ..။ ဆင့်ဆင့်ရဲ့အိပ်ခန်းဆီကို နှစ်ယောက်သား လက်ချင်း ဆုတ်ကိုင်ပြီး သွားကြ သည် ..။ သူ့လိင်တန်ကြီး က ပုဆိုးကြားက ထိုးထောင်ပြီး ထွက်နေ သည် ..။ အိပ်ခန်းထဲကို ရောက်တော့ ဆင့်ဆင့်ရဲ့ ကုတင်ပေါ်မှာ ထိုင်မိကြရင်း အငမ်းမရ နမ်း
စုတ်ကြပြန် သည် ..။ ဝေေ၀လွင် ပြန်မလာခင် မြန်မြန် စခန်းသွားကြရမည် ဆိုတာကို ဆင့်ဆင့်ကော သန်းထွန်းအောင်ကော သိရှိနေကြတာမို့ အချိန်ဆွဲမနေတော့ဘဲ သူတို့ကိုယ်ပေါ်က အ၀တ်တွေကို ခပ်သွက်သွက်ဘဲ ချွတ်ပစ်ကြသည် ။
ဆင့်ဆင့်ရဲ့ ရင်သားစိုင်တွေကို အားရပါးရဘဲ ဆုတ်နယ်ညှစ်ရင်း ပက်လက် ပေါင်ကားပေးနေတဲ့ ဆင့်ဆင့် ပေါင်တန်တွေကြားကို နေရာဝင်ယူလိုက်သော သန်းထွန်းအောင်ရဲ့ လိင်တန်ကြီးဟာ အစွမ်းကုန် မတ်မတ်တောင်နေ သည် ..။
ဆင့်ဆင့်ရဲ့ ရင်စိုင်ထိပ်ဖူး နို့သီးခေါင်းလေးတွေ သည် ကာမစိတ် ထကြွပြင်းထန်နေတာကြောင့် မာတင်းကာ ထောင်နေသည် ..။ သန်းထွန်းအောင် ဆင့်ဆင့် နို့သီးလေးတွေကို တဖက်ပြီး တဖက် အငမ်းမရဘဲ စို့ သည် ..။ ဆင့်ဆင့်လဲ တဟင်းဟင်း နဲ့ သန်းထွန်းအောင် ရဲ့ ကျောပြင်ကြီး ကို ပြန်လည်ဖက်သိုင်းကာ လက်သဲတွေနဲ့ ကုတ်ခြစ် သည် ။
ဆင့်ဆင့်လဲ ပြတ်လပ်နေတဲ့ ကာမအရသာကို ရတော့မှာ ဖြစ်လို့ ပီတိတွေ ဖြာနေသလို မိမိလင် ကိုဇော်ထိုက်ရဲ့ လိင်တန်ထက် ထွားကြိုင်းရှည်လျားသော သန်းထွန်းအောင်ရဲ့ လိင်တန်ကြီး ကို ကြည့်ပြီး ကြက်သီးများထ ရင်တွေ ခုံနေပေ သည် ..။
သန်းထွန်းအောင်လဲ ဖြုတ်ချင်နေတာကြာနေပြီဖြစ်တဲ့ ဆင့်ဆင့်ကို ဒီတခါတော့ ဖြုတ်ရပြီမို့ အလွန်အားတက် သဘောကျကာ မို့ဖေါင်းပြီး ကာမရှေ့ပြေး အရေကြည်တွေနဲ့ စိုစိုရွှဲနေတဲ့ ဆင့်ဆင့်ရဲ့ အင်္ဂါစပ်ကြီးထဲကို သူ့လိင်တန်ထိပ်ဖူးကြီးကို ထိုးနှစ်လိုက်လေ သည် ..။
ဆင့်ဆင့် သည် သူမအင်္ဂါစပ် ကို အမွှေးများ ရိပ်သင်ထားတာမို့ မို့ဖေါင်းခုံးကြွနေတဲ့ ဆင့်ဆင့်အင်္ဂါစပ်ကြီးမှာ တပ်မက်စရာ ကောင်းလှတာကြောင့် သန်းထွန်းအောင် မှာ ကုန်းယက်ချင်စိတ်တွေ တဖွားဖွား ပေါ်ပေါ်က်နေရ သည် ။
“ အို ...အကို့ ..ဟင့်ဟင့် ...”
လိင်တန်ထိပ်ဖူးကြီး က ထင်သလို ၀င်မသွားလို့ သန်းထွန်းအောင်လဲ ဆင့်ဆင့် အင်္ဂါစပ်အကွဲကြောင်းတလျောက် လိင်တန်ထိပ်ဖူးကြီးကို စုံချီဆန်ချီ သုံးလေးကြိမ်လောက် ပွတ်တိုက် လိုက် သည် ..။ ဆင့်ဆင့် အင်္ဂါစပ်က အရေတွေ သူ့ထိပ်ဖူးကြီးမှာပေလူးစိုရွှဲသွားပြီးမှ ပြန်ထိုးထည့်ပြန် သည် ..။
တင်းခံတစ်နေရာက အင်္ဂါစပ်ထဲကို နဲနဲ ၀င်သွားသည် ..။
“ အ.......အ.....အကို့ . . .”
ဆင့်ဆင့်လဲ သန်းထွန်းအောင်ရဲ့ ကျောပြင်ကြီးကို တအားဆွဲဖက်လိုက်သလို ပေါင်တန်တွေကို အစွမ်းကုန် ဖြဲကားပေးလိုက် သည် ..။
“ အကို..ဖြေးဖြေး .. အကို့ဟာကြီးက သိပ်ကြီးတာဘဲ . . .”
သန်းထွန်းအောင် လဲ စီးစီးကြီး တ၀က်ခန့် ၀င်သွားသော သူ့လိင်တန်ကြီးကို အနောက်ကို အသာ ပြန်ဆုတ်ပြီးမှ ပြန်ထိုးသွင်းပြန် သည် ..။ ဆင့်ဆင့်လဲ ယောင်္ကျားနဲ့ကင်းကွာနေတာကြာပြီမို့ တင်းမာတုတ်ခိုင်တဲ့ လိင်တန်ကြီး ရဲ့အသွင်းအထုတ်ကြောင့် အလွန်တရာ ယားယံနေရတဲ့ သူမ အင်္ဂါစပ် အတွင်းသားတွေဟာ အကြောပေါင်းတထောင်စိမ့်သွားရအောင်ဘဲ ကာမအတွေ့ထူး ကို ရရှိသွားလို့ မျက်စိလေးမှေး..ပါးစပ်လေးမဟတဟနဲ့ ကျေနပ်နေပေ သည် ..။
သန်းထွန်းအောင်လဲ စေးပိုင်နေသော ဆင့်ဆင့် အင်္ဂါစပ်ကြီးကို အထူးသဘောကျမိသွားပြီး အရသာခံကာ တချက်ချင်းထိုးဆောင့်နေပေ သည် ..။ ဆင့်ဆင့်သည် သူမခေါင်းကို ဘယ်ညာ ရမ်းခါနေသည် ..။ ပေါင်တန်ရှည်တွေ က လှုပ်ရှားနေသည် ..။ စီးကနဲ...စီးကနဲ လိင်တန် တုတ်တုတ်ကြီး သည် နူးညံ့အိစိုနေတဲ့ ဆင့်ဆင့် အင်္ဂါစပ်ထဲကို ၀င်လိုက် ထွက်လိုက် .. ထိုးဆောင့်နေသည် ..။
ဆင့်ဆင့်ရဲ့ ရင်စိုင်ထွားထွားတွေ ကို အားရပါးရ ဆုတ်ကိုင်ပြီး ဖြေးဖြေးနဲ့ မှန်မှန် ထိုးဆောင့်ထည့်နေ သည် ..။ ဖပ်ဖပ် ဖပ် အသံတွေ ထွက်လာသည် ..။
သန်းထွန်းအောင်ရဲ့ တရှူးရှူး နဲ့ အသက်ရှူသံ ပြင်းပြင်း နဲ့အတူ ဘွပ် ဖတ် အသံတွေက ဆူညံနေသည် ..။
“ အကိုရယ်..အသံတွေ တအားထွက်တာဘဲ . .”
ဆင့်ဆင့်က ညည်းသည် ..။
သန်းထွန်းအောင် လဲဆင့်ဆင့်နို့တွေကို အရသာခံကာ ဆုတ်နယ်နေသည် . .။
“ နို့စို့ပေးပါလား..အကို ….”
ဆင့်ဆင့်က တောင်းခံလာလို့ သူမရဲ့ နို့သီးခေါင်း နီညိုညိုလေးတွေကို တဖက်ပြီးတဖက် သန်းထွန်းအောင် စို့ပေးရ
ပြန်သည် ..။ ဆင့်ဆင့်မှာ အောက်မှ တင်ပါးကြီးတွေ စကောဝိုင်းမွှေ့ရမ်းလိုက်..ဆတ်ကနဲ ဆတ်ကနဲကော့ကော့ပေးလိုက် နဲ့ ရမက်ပြင်းပြနေလေရာ သန်းထွန်းအောင်လဲ သူ့မိန်းမ ဝေေ၀လွင် ထက် အောက်ပေးကောင်းလှသော ဆင့်ဆင့်ကိုအထူးသဘောကျနှစ်ခြိုက်မိပြီး အရှိန်မြှင့်တင်ကာ ခပ်သွက်သွက် ထိုးဆောင့်လေ သည် ..။
“ဖင်တွေကိုညှစ်ကိုင်ပြီးလိုး..အကို ...ဖင်တွေကို ကိုင်ပြီးလိုးပေး...”
ဆင့်ဆင့်က တောင်းဆိုလာပြန်တာကြောင့် ဆင့်ဆင့် တင်ပါးကြီးတွေအောက် လက်သွင်းကာ ဆုတ်ကိုင်ကာ ဆောင့်ထည့်ပေးရပြန် သည် ..။
ဆင့်ဆင့်သည် ပွင့်လင်း ရဲတင်းစွာ သူမကို တအားဆောင့်ပေးဖို့ တောင်းခံနေတာကြောင့် သန်းထွန်းအောင်လဲ တအားကြုံး ဆောင့်ထည့်ပေးလေ သည် ...။
“ ကောင်းလိုက်တာ..ကောင်းတယ်....ကောင်းတယ်...လိုး...လိုး..တအားလိုးပေး ...”
အောက်ကလဲ ကော့လိုက် ညှစ်လိုက်နဲ့ တုံ့ပြန်နေတာကြောင့် ဆက်တိုက်ဆောင့်ထည့်နေသော သန်းထွန်းအောင်
မှာ အရသာထူးကဲလွန်းလှပြီး ထိန်းမထားနိုင်တော့ဘဲ သုတ်ရေတွေ တပြုံကြီး ဆင့်ဆင့်ရဲ့ အင်္ဂါစပ်အခေါင်းထဲကို ပန်းထုတ်ကာ လမ်းဆုံးကို တက်လှမ်းသွားသလို တချိန်ထဲမှာဘဲ ဆင့်ဆင့် သည်လဲ လမ်းဆုံးကို တက်လှမ်း ရောက်ရှိ
သွား သည် ...။
“ ကောင်းလိုက်တာ.....အကိုရယ် . . . .”
ဒီအချိန်မှာဘဲ အိမ်ရှေ့မှ ကားရပ်သံကြားရတာနဲ့ သန်းထွန်းအောင် လဲ ကဗျာကရာ အ၀တ်များကောက်ဝတ်ပြီး ဆင့်ဆင့်အိပ်ခန်းထဲက ထွက် သည် ..။ သူထင်တဲ့အတိုင်း မိန်းမဖြစ်သူ ဝေေ၀လွင် ပြန်လာတာ ဖြစ်နေ သည် ..။
တော်ပါသေးရဲ့ ..အချိန်ကိုက် ဖြစ်သွားလို့ ...။
“ ကိုအောင် . .ဘာလုပ်နေလဲ ...ဝေ့ကိုလာကူပါအုံး . .ဈေးဝယ်လာလို့..အထုပ်တွေ ပါလာတယ် . . .”
ဝေေ၀လွင့်အသံကြောင့် သူ အိမ်ရှေ့ကို ပြေးထွက်သွားရ သည် ..။
ဝေေ၀လွင် သည် သူမသူငယ်ချင်းနွယ်နီတို့ အိမ်မှာ အဖေါ်ကောင်းလို့ ၀ိုင်တွေ သောက်ဖြစ်လာလို့ ရေချိန်ကိုက်လာ
သည် ..။အိမ်ရောက်တာနဲ့ အိပ်ရာထဲထိုးလှဲကာ အိပ် သည် ..။ ခဏအကြာ တခေါခေါတောင် ဟောက်လို့နေ သည် ။
သန်းထွန်းအောင်လဲ ဝေေ၀လွင် အိပ်ပျော်သွားသောအခါ ခြေဖေါ့နင်းကာ သူတို့ အိပ်ခန်းထဲက ထွက်ခဲ့ သည် ..။
ဆင့်ဆင့် အိပ်ခန်းဆီကို ရောက်သွားသောအခါ ဆင့်ဆင့်က ဝေေ၀လွင် မိသွားသိသွားရင်ခက်မည် ..ဝေေ၀လွင် မရှိတဲ့အချိန်တွေမှ လိုးကြရအောင်လို့ ပြောပြီး ငြင်းဆန် သည် ..။ ဆင့်ဆင့်က တံခါးဖွင့်မပေးလို့ သန်းထွန်းအောင် ကုတ်ချောင်းချောင်း နဲ့ သူတို့ အိပ်ခန်းထဲကို ပြန်ခဲ့ရလေ သည် ..။
သန်းထွန်းအောင် ရဲ့ လိင်တန် သည် တင်းမာ ကြီးထွား ထောင်မတ်နေသည် ..။ ဝေေ၀လွင် ရဲ့ဘေးမှာ ပက်လက် အိပ်ရင်း သူ လိင်တန်ကြီးကို ပွတ်တိုက် ကွင်းတိုက် နေလိုက်ရ သည် ..။သန်းခိုင် သည် သူငယ်ချင်း သန်းထွန်းအောင်နဲ့ ဘီယာသောက်ရင်း သန်းထွန်းအောင် ပေးလိုက်တဲ့ ကာမစွမ်းအား ဆေးပြားတွေကို စမ်းသပ်လိုတာကြောင့် အိမ်ကို ပြန်ရောက်သောအခါ ဆေးပြားကို သောက် သည် ..။
“ဟော..မောင် ပြန်လာပြီလား ..သမီး မရှိဘူး ..သူငယ်ချင်း အိမ် သွားတယ် ...”
မိန်းမဖြစ်သူ ဆွေဆွေက အိမ်ရှေ့ဧည့်ခန်းထဲတွင် တီဗွီ ထိုင်ကြည့်နေ သည် ..။ သမီး သွန်းဆု ကတော့ သူမသူငယ်ချင်းတယောက် အိမ်ကို သွားနေသည် ..။ ဆေးပြား သောက်အပြီး ဆွေဆွေနဲ့အတူတူ တီဗွီို ထိုင်ကြည့်နေလိုက် သည် ..။ ဆွေဆွေက သူ့ပုခုံးကို ခေါင်းမှီလာ သည် ..။ သူက ဆွေဆွေ့ကို အလိုက်သင့် ဖက်ထားရင်း
ဆွေဆွေ့လက်မောင်းသားတွေကို ဖွဖွလေး ပွတ်သပ်ပေးနေ သည် ..။ ဆွေဆွေ့တတောင်ဆစ် က မတော်တဆ သူ့ပေါင်ကြားကို ထိမိသွားသောအခါ ဆွေဆွေ သည် မြွေဟောက်ကြီးတကောင်လို ပါးပျဉ်းထောင်ထနေသော သူ့လိငတန်ချောင်းကြီးကို သတိပြုမိသွား သည် ..။
“ဟယ်တော့..မောင့်ဟာကြီး မာ ထောင်နေတယ် ......”
“ ရော့ပါ..ကိုင်ပေး..သမီး အိမ်မှာ မရှိတုံး ...”
မျိုးသန်းခိုင် သည် အလုပ်များလှတာကြောင့် ဆွေဆွေ့ကို ကာမမစပ်ရှက်ဖြစ်တာ ကြာနေပြီ ..။
ဆွေဆွေလဲ..မျိုးသန်းခိုင်ဆီကမရတာကြာပြီဖြစ်တဲ့ကာမအရသာကိုလိုလားစိတ်တွေပြင်းပြလာတာကြောင့်လင်ဖြစ်သူရဲ့ ည၀တ်ဘောင်းဘီ ကို ဆွဲချွတ်ချပြီး လိင်တန်ကြီးကို ဆုတ်ကိုင်ဖျစ်ညှစ်ကာ ရှေ့တိုးနောက်ငင် ကစားပေးလေ သည် ..။ မျိုးသန်းခိုင် လဲ ဆေးစွမ်းပြတာကို သဘောကျနေ သည် ..။ ဆေးကူထားလို့ ခါတိုင်း တောင်တာထက် ပိုပြီးမာကျောတင်းမာကြီးထွားနေ သည် ..။ အကြောအပြိုင်းပြိုင်း ထောင်ထနေသည် ..။ ထိပ်ဖူးဒစ်ကြီးက မှိုပွင့်ကြီးတပွင့်လို ကားကားကြီး ...။
“ အင်း ...”
ဆွေဆွေ သူ့လိင်တန်ထိပ်ဖူးပိုင်းကို ငုံစုတ်လိုက်သောအခါ မျိုးသန်းခိုင် ဆိုဖါနောက်မှီမှာ ခေါင်းမှီပြီး မျက်စိမှိတ်ထားလိုက် သည် ..။ ဆွေဆွေ သည် ရီးစား ဘ၀ထဲက ဒီလိုဘဲ သူ့ကို စုတ်ပေးနေကျ ဖြစ် သည် ..။ ဆွေဆွေလဲ လိင်တန်ထိပ်ဖျားကို လျာနဲ့ ယက်ပေးလိုက်..လျာထိပ်နဲ့ ပွတ်လှိမ့်ထိုးဆွပေးလိုက် လုပ်ပေးရင်း ဒီအတန်ကြီးနဲ့ မကြာခင် လင်ဖြစ်သူက သူမကို ကောင်းကောင်းထိုးဆောင့်ပေးတော့မည် ဆိုတာလဲ သေချာနေတာမို့ အင်္ဂါစပ်ထဲက ကာမရှေ့ပြေး အရေကြည်တွေ စိမ့်ယိုစီးကျလာရပေသည် ..။
“ အိုး....အားပါးပါး ..ကောင်းလိုက်တာ ဆွေရယ် …...အီး ..အဲလို လျာလေးနဲ့ ကစားပေးတာ ကျင်ကျင်သွားတယ်..ဟင်သိပ်ကောင်းတာဘဲ ..”
“ ကဲ...မောင် ..အိပ်ခန်းထဲ သွားကြရအောင်..တော်ကြာ သမီး ပြန်ရောက်လာရင် ပက်ပင်းကြီး တိုးနေလို့ခက်နေမယ် ...”
ဆွေဆွေက သူ့အရှေ့ကနေ အိပ်ခန်းထဲကို ၀င်သောအခါ မျိုးသန်းခိုင် ဆွေဆွေ့ တင်ပါးကြီးတွေရဲ့ အောက်ဘက်အနားထမိန်မှာ အရေကွက်ကြီး စိုကွက်နေတာ တွေ့ရသည် ..။ ဆွေဆွေတယောက်လဲ ကာမစိတ်တွေ အရမ်း ပြင်းပြ ထကြွနေပြီ ဆိုတာ သိလိုက်သည် ..။
အိပ်ခန်းထဲ ကို ရောက်တာနဲ့ မျိုးသန်းခိုင် က ဆွေဆွေ့ကို ကုတင်ပေါ်မှာ ပက်လက်လှန် ပေါင်ကားစေပြီး ဆွေဆွှေ့ ဖေါင်းကြွနေတဲ့ အဖုတ်ကြီးကို လျာနဲ့ ယက်ပေးလေ သည် ..။ ဆွေဆွေမှာ လင်ဖြစ်သူရဲ့ အယက်ကို မခံရတာ ကြာပြီ ။
အပျိုဖြစ်လာသော သမီး အိမ်မှာ ရှိတာကြောင့်လဲ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ကာမမစပ်ရှက် နိုင်တော့လို့ အခုလို သမီး အိမ်မှာ မရှိခိုက် အရသာခံ ဖြစ်သည် ..။
မျိုးသန်းခိုင် လဲ ဆွေဆွေ့ကို သူတို့ ညားခါစတုံးက ယက်ပေးခဲ့သလို စောက်စိကို လျာနဲ့ မထိတထိ ကလိပေးလိုက်..
စောက်ခေါင်းထဲကို လျာနဲ့ထိုးထည့် မွှေပေးလိုက် ...လုပ်ပေးလေရာ ဆွေဆွေမှာ အရမ်း သဘောကျ နှစ်ခြိုက် မိရပြီးစောက်ဖုတ်ထဲကလဲ လှိုက်လှိုက်ပြီး ယားလွန်းလာလို့ မျိုးသန်းခိုင် ကို ဆက်ပြီးမယက်တော့ဘဲ လိုးပေးဖို့တောင်းဆိုတောင်းခံ လေ သည် ..။
“ မောင် ...တော်ပြီကွယ် ..ဆွေ လိုချင်လှပြီ ...ချစ်ပေးတော့ …. ”
မျိုးသန်းခိုင် ရဲ့ လိင်တန်ကြီးမှာလဲ ဆွေဆွေ့ကို အဖုတ်ယက်ပေးသောအခါ စိတ်တွေ တအားနိုးကြွသထက်ကြွ လာတာကြောင့်..ပိုပိုပြီး ဖွံ့ထွား ရှည်လျားလာရ သည် ..။
မကြာခင်လဲပွဲကြီးပွဲကောင်းနွှဲရတော့မည်ဆိုတာသေချာနေတာကြောင့် လိင်တန်ကြီးမှာ မာကျောသထက် မာကျောလာပြီး တဆတ်ဆတ် ခါနေရ သည် ..။
မျိုးသန်းခိုင် လဲသူ့လိင်တန်ကြီးကို အရေတွေ ပေလူးနေသော ဖေါင်းကြွခုံးမောက်နေတဲ့ ဆွေဆွေ့အဖုတ်ကြီးထဲကို ထိုးသွင်းလေ သည် ..။ ဆွေဆွေမှာ ပေါင်တွေကို အစွမ်းကုန် ဖြဲကားကာ..ခင်ပွန်းသည်ရဲ့ လိင်တန်ကြီး သူမစောက်ခေါင်းထဲ တိုးဝင်လာတာကို ကျေနပ်စွာ ခံယူနေသည် ...။
“ အင်း...မောင့်ဟာကြီးက ကြီးလိုက်တာကွယ်..တကထဲမှဘဲ..”
အမူပိုပို နဲ့ မျက်စောင်းလေး ထိုးကာ ပြောလိုက်သောဆွေဆွေ့ကို မျိုးသန်းခိုင် သဘောကျစွာကြည့်ရင်း သူ့လိင်တန်
ကို သွင်းလိုက်ထုတ်လိုက် စတင်တော့ရာ ဆွေဆွေမှာ တအင်းအင်း နဲ့ အောက်မှ ဖင်ကြီးတွေကို ကော့ကော့ပေးလာ သည် ..။ မလိုးဖြစ်တာ ကြာလို့လား မသိ ..။ ဆွေဆွေရဲ့ စောက်ဖုတ် သည် ငယ်ငယ်က ညားခါစက လိုးရသလိုဘဲ တင်းကျပ်နေလို့ မျိုးသန်းခိုင် မှာ အလွန်သဘောကျကာ တဖန်းဖန်း နဲ့ ဆောင့်ကာလိုး သည် ..။
“အို..အင်း ..ကောင်းတယ်..မောင် ..လိုး..လိုး...ဆောင့်...ကြိုက်တယ်..ကြိုက်တယ် ….”
ဆွေဆွေလဲ ကာမစိတ်တွေ ပြင်းထန်နေလို့ မရှက်တော့ဘဲ အသံကျယ်ကျယ် နဲ့ တောင်းဆိုကာ သူမ ဖင်ကြီးတွေကို
စကောဝိုင်း မွှေ့ရမ်းပေးလိုက်ယယကော့ကော့ပေးလိုက် နဲ့ ကာမစည်းစိမ် ကို ခံစားနေပေ သည် ..။
ကာမဇောကပ်လို့ သူတို့ လင်မယား သည် သမီး သွန်းဆု တယောက် အိမ်ပြန်ရောက်လာတာကို သတိမပြုမိကြပေ ..။ သွန်းဆုအောင် သည် အိမ်ပြန်ရောက်သောအခါ မိဘများရဲ့ အိပ်ခန်းထဲမှ အသံဘလံတွေ ကြားရလို့ ဟာ..ငါ့အဖေ နဲ့ အမေတော့ ဆော်ကုန်ကြပြီ ..ဆိုပြီး ခြေဖေါ့နင်းကာ မိဘတွေရဲ့ အိပ်ခန်း နား ကပ်လာပြီး အထဲက အသံတွေကို နားစွင့်လိုက် သည် ..။ တဖန်းဖန်း နဲ့ အသားချင်း ရိုက်ခတ်သံတွေ အပြင် အမေဖြစ်သူ ရဲ့..အသံကျယ်ကျယ် နဲ့ဆောင့်ပေး..ဆောင့်ပေး.. တအားလိုး..ဆိုပြီး ပြောလိုက်သံတွေကို ကြားလိုက်ရ သည် ..။
ဟယ်....သူတို..သူတို့..ဟိုဒင်း လုပ်..နေကြတာကိုး …..
သွန်းဆု လဲ အသံတွေကြားရတာနဲ့တင် အားမရဘဲ ..မိဘများ..ဘယ်လိုတွေ လုပ်ကိုင်ေ နကြတယ် ဆိုတာကိုတွေ့ချင်မြင်ချင်မိလာရ သည် ..။ ဘယ်လို ချောင်းကြည့်နိုင်မလဲ....သွန်းဆု အပေါက် ရှာပြီ တိုက်ခန်း မို့ နံရံမှာ ချောင်းစရာ အပေါက် မရှိ ..။ အသံတွေ က တဖွတ်ဖွတ် တဖပ်ဖပ် နဲ့ ဆူညံနေ သည် ..။ သွန်းဆ စိတ်တွေ နိုးကြားဖေါက်ပြန်လာ သည် ..။ သဘာဝသွေးသားစိတ်တွေ ထကြွ လာ သည် ..။ ပေါင်ကြားမှာ စိုတိုတို ဖြစ်လာသည် ..။ အပျိုဖေါ်ဝင်စကထဲက ဒီလို အရေစိုတာ ဖြစ်ဖြစ်လာလို့ သူငယ်ချင်းမတွေ၇ဲ့ အကြံပေး လမ်းညွှန်မှုနဲ့ သူမ စောက်ဖုတ်ကို ပွတ်ကြည့်ဘူးနေပြီ ..။ ဘတ်စ်ကားပေါ်မှာလဲ ကားကျပ်တာကို အခွင့်အရေးယူပြီး မိန်းမတွေ
အနောက်က လိုက်ထောက်တတ်တဲ့ ထောက်လှမ်းရေးတွေနဲ့လဲ ကြုံဘူးပြီးတာမို့ ယောင်္ကျားတွေနဲ့ ထိမိ ပူးမိသောအခါ သဘာဝ ကာမစိတ်နိုးကြွလာတတ်တာကိုလဲ အတွေ့အကြုံရှိဘူးပြီးသား မဟုတ်လား ...။
မျိုးသန်းခိုင် နဲ့ ဆွေဆွေတို့ သည် သမီး ပြန်ရောက်နေတာကို မသိတာကြောင့် စိတ်ရှိလက်ရှိဘဲ ဆွဲနေကြပြီ ..။
ဖွတ်ဖပ်ဖွတ်ဖပ် အသံတွေ ဆူညံနေ သည် ...။
မျိုးသန်းခိုင်ရဲ့ ကိုယ်မှာ ချွေးတွေ ရွှဲ့နေ သည် ..။ ဆွေဆွေ့ကို အရင်ပြီးစေချင်လို့ စိတ်ကိုထိန်းထားကာ ဆောင့်ပေးနေသည် ..။ ဆွေဆွေလဲ အောက်မှ ကော့ကော့ပေး သည် ..။ တက်ညီလက်ညီ ရှိလှ သည် ..။
“ အင်း..အင်း ကောင်းတယ် ..ကောင်းတယ် ..အရမ်းကောင်းတယ် ...လိုး...လိုး ….ဆောင့် ..ဆောင့် . . .” ပြိုင်တူလို
ရှေ့ဆင့်နောက်ဆင့် ပြီးသွားကြ သည် ...။ ဆွေဆွေသည် လင်ဖြစ်သူကို တအားဖက်ခါ ငြိမ်ကျသွား သည် ..။
“ မောင် က လိုးနိုင်တုံးဘဲ ...”
ဆွေဆွေက သူမအဖုတ်ထဲက ပျော့ခွေပြီး ထွက်လာတဲ့ မျိုးသန်းခိုင်ရဲ့ လိင်ချောင်းကြီးကို လက်ညှိုးနဲ့ ထိရင်း ပြောလိုက်သည် ..။
သွန်းဆု သည် ပေါင်ကြားကို လက်သွင်းကာ မိမိ အဖုတ်ကို ဖိဖိပွတ်ရင်း ခွေခွေလေး ကာမမီးတွေတအား ထကြွတောက်လောင်နေဆဲ .. ။ စောစောက ကြမ်းသွားတဲ့ သူမ မိဘတို့ အချစ်ပွဲလိုမျိုး တွေ့ကြုံဘူးချင်တဲ့ အပျိုရိုင်းမလေး သည် စိတ်ကူးတွေနဲ့ ရူးနေ၇ပြီ ..။
သူမစောက်ခေါင်းထဲက တအားယားလွန်းနေသည် ..။ လက်ချောင်းများနဲ့ မိမိအဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားတွေကို ဖိဖိပွတ်ရင်း
အာသာဖြေနေမိသည် ..။ သွန်းဆု ယောင်္ကျား လိင်တန်ကို မြင်ယောင်ကြည့်ပြီး..မိမိအဖုတ်ထဲကို ယောင်္ကျားလိင်တန်နဲ့
အထိုးခံရင် သိပ်ကောင်းမှာဘဲလို့ စိတ်ကူး မှန်းဆနေသည် ..။
ဒီနေ့ ဝေေ၀လွင် ပဲခူးဘက်သွားမည် ..။ အိမ်ပြန်နောက်ကျမည် လို့ ဖုန်းဆက် သည် ..။ သန်းထွန်းအောင် ပျော်သွားသည် ..။ ဝေေ၀လွင် မရှိရင် သူ ဆင့်ဆင့်ကို ဖြုတ်နိုင်မည် မဟုတ်လား ..။ အိမ်ကို ၀မ်းသာအားရ ပြန်လာ သည် ..။ အ၀တ်တွေ လျော်နေသော ဆင့်ဆင့် သည် ရေချိုးခန်းထဲမှာ ရေစိုနေတဲ့ ထမိန်ရင်လျားနဲ့ ဆောင့်ကြောင့်
ထိုင်ရက် ရှိနေသည် ..။
သန်းထွန်းအောင်ရဲ့ မျက်လုံးတွေက ဆင့်ဆင့်ရဲ့ စွင့်ကား ထယ်ဝါလှတဲ့ တင်ပါးတွေကို ငေးစိုက် ကြည့်နေမိ သည် ။
“ အို..အကို ..ပြန်ရောက်လာတယ်..ဟုတ်လား..ရုံးစောစော ဆင်းခဲ့တာလား ..”
“ အင်း..ဆင့်ဆင့် နဲ့ တွေ့ချင်လွန်းလို့. . .”
“ အိုး..သတိလဲ ထားအုံး..မဝေ သိသွားရင် မိုးမီးလောင်မယ် ..”
“ ပဲခူးသွားလို့ အိမ်ပြန်နောက်ကျမယ် ..လို့ ဖုန်းဆက်တယ် ...”
“အကိုက သိပ်ပျော်သွားတယ်ပေါ့လေ ..ခိခိ ...”
သန်းထွန်းအောင် က ဆင့်ဆင့်လက်ကို ဆွဲပြီး အိပ်ခန်း ဆီကို ခေါ်သည် ..။
“ဟိတ်..အကို ..သိပ်ကဲနေပါလား ...”
ဆင့်ဆင့်လဲ ပြုံးစိစိ နဲ့ ပါလာသည် ..။ အိပ်ခန်းထဲ ရောက်တာနဲ့ သန်းထွန်းအောင် က ဆင့်ဆင့်ထမိန် ကို ဆွဲချွတ်
ပစ် သည် ..။ ကိုယ်လုံးတီး ဖြစ်သွားသော ဆင့်ဆင့်ကလဲ အားကျမခံ..သန်းထွန်းအောင် ရဲ့ ပုဆိုး ကို ဆွဲချွတ်ပစ်
သည် ..။ အမွှေးဖွားဖွားကြားက ညိုမဲမဲ အတန်ကြီး မတ်မတ်တောင်နေတာ ဆင့်ဆင့်တွေ့လိုက်ရ သည် ..။ ဂွေးစိ
နှစ်လုံးက တွဲလောင်းကြီး ကျနေသည် ..။
ဟွန်း ..ဘာကြည့်တာလဲ..အကို . .။
ဆင့်က အရမ်းလှလို့ . .။
သန်းထွန်းအောင် လဲ ဆင့်ဆင့် ကို အငမ်းမရဘဲ ဆွဲဖက်ခါ နှုတ်ခမ်းတွေကို စုတ်ရင်း..ကုတင်ပေါ်ဆွဲလှဲ သည် ..။ ဆင့်ဆင့်ကလဲ သူ့ကို အငမ်းမရ ဘဲ ပြန်လည် တုံ့ပြန် စုတ်နမ်း သည် ..။
ဆင့်ဆင့် နဲ့ သန်းထွန်းအောင် ဝေေ၀လွင် အိမ်ပြန်မလာတာကို အခွင့်ကောင်း ယူပြီး လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပျော်ပါး
ကြပြီ ..။ ဆင့်ဆင့် ရင်သားစိုင်တွေကို နမ်းစို့ပေးနေရာက ဆင့်ဆင့်ပေါင်ကြားကို ခေါင်းအပ်တော့ ..“ အကို...ဘာ
တွေ လုပ်နေတာလဲ ...” လို့ ပြောရင်း ဆင့်ဆင့်က သူမပေါင်တန်တွေကို စေ့ဖို့ ကြိုးစား သည် ..။ သန်းထွန်းအောင်
က ပေါင်တန်တွေကို လက်နှစ်ဘက်နဲ့ ဖြဲကိုင်ကာ ဖေါင်းမို့ခုံးထနေတဲ့ ဆင့်ဆင့် စောက်ဖုတ်ကြီး ကို နမ်းရှုံ့လေ သည် ..။
အို..အာ..အကို..ဖုန်းကံတွေတော့ နိမ့်ကုန်တော့မှာ ဘဲ . .အို..ဟင့်ဟင့် . .. .။
သန်းထွန်းအောင် ကဆင့်ဆင့်သူ့ခေါ်င်းကဆံပင်တွေကိုဆွဲကိုင်တွန်းဖယ်နေတဲ့ကြားကဆင့်ဆင့်အဖုတ်နီညိုညိုကြီးကို သူ့လျာကြီးနဲ့ အပြားလိုက် ယက်လေ သည် . . ။ ပြတ်ကနဲ ပြတ်ကနဲ အသံတွေ နဲ့အတူ ဆင့်ဆင့် ခါးလေးကော့ကာ
တဟင်းဟင်းနဲ့ ငြိမ်ကျသွား သည် ..။ ထိမိတဲ့ အရသာထူးကြောင့် မျကိစိလေးမှေးစင်းကျသွားသည် ...။
အို...အကိုရယ် . . .မရွံဘူးလား . . .။
သန်းထွန်းအောင် က ခေါင်းရမ်းပြကာ ဆင့်ဆင့်စောက်စိလေး ကို ပြွတ်ကနဲ ပြွတ်ကနဲ စုတ်ပေးလိုက်ရာ ဆင့်ဆင့်မှာခါးလေးကော့ကာ ကျင်ထုန်တက်အောင် ကောင်းသွားရပြီး သန်းထွန်းအောင်ရဲ့ ခေါင်းက ဆံပင်တွေကို တအား ဆွဲကာ တအားအား နဲ့ အော်ညည်းလေ သည် . .။
“ အကို..အကို.....အကို သိပ်ကဲနေပါလား....အကို သိပ် လုပ်တတ်တာဘဲ...အား.....ဟင့်ဟင့် ….. ”
သန်းထွန်းအောင်ရဲ့ လျာကြီးက သွက်လှသည် ..။ ဆင့်ဆင့် စောက်ဖုတ်တခုလုံး သူ့လျာကြီး ပြေးလွှားနေ သည် . .။
ပြတ်ပြတ်ပြတ် နဲ့ လျာယက်သံတွေ နဲ့ ဆင့်ဆင့် အော်ညည်းသံတွေ ဆူညံနေ သည် ..။
ဆင့်ဆင့် စောက်ဖုတ်အတွင်းထဲကို လျာကြီး တအားထိုးသွင်း မွှေနှောက်သောအခါ..ဆင့်ဆင့် ထွန့်ထွန့်လူးကာ
တအား ခံချင်ရပြီ ..။ နတ်ပူးသလို တဆတ်ဆတ် တုန်ခါကာ . .“ အကိုရယ် ..လိုးပေးပါတော့..ဆင့်ယားလှပါပြီ ..လို့ မ ရှက်နိုင်တော့ဘဲ တောင်းခံရလေပြီ...။
သန်းထွန်းအောင် မှာ ဒီလို ပွင့်လင်းစွာ လိုးပေးဖို့ တောင်းဆိုတာကို အင်မတန်မှ သဘောကျ သည် ..။ မိန်းမတယောက် က ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း လိုးပေးပါလို့ တောင်းဆိုတာ ကြားရသောအခါ သူ့လိင်တန် သည် ခါတိုင်း အချိန်တွေထက် ပိုပြီး တင်းမာ ကြီးထွားလာသည် လို့ သူထင်သည် ...။
ဆင့်ဆင့်ကို အချိန်ဆိုင်းမနေဘဲ လှေကြီးထိုး ပက်လက် တက်မှောက် ပုံစံနဲ့ဘဲ တက်လိုးလေတော့ သည် ..။
ဆင့်ဆင့်မှာလဲ တအားစောက်ဖုတ်ထဲက ယားလွန်းတာကြောင့် သန်းထွန်းအောင် လိုးသမျှကို အောက်မှ ပင့်ကော့ပေးလိုက်..ဖင်ကြီးတွေကို စကောဝိုင်းမွှေ့ရမ်းပေးလိုက်နဲ့ အသားကုန် ကြမ်းချင်တိုင်း ကြမ်း ..တအားအား နဲ့
သူနိုင်ကိုယ်နိုင် အပြိုင်ကြဲ လိုးကြလေ သည် ..။ စိတ်ရှိလက်ရှိဘဲ ဆောင့်ကာလိုးကြ သည် ..။ ပြိုင်တူလိုဘဲ လမ်းဆုံးကို
တက်လှမ်းသွား သည် ..။
ဝေေ၀လွင် ပြန်မရောက်ခင် နှစ်ချီ ဆက်တိုက် လိုးပစ်လိုက်ကြပြီး ကိုယ်လုံးတီး တွေနဲ့ဘဲ လှဲအိပ်နေကြ သည် ...။
ဝေေ၀လွင် ညဉ့်နက်မှ ပြန်ရောက် သည် ..။
သူမပြန်လာသောအခါ ဆင့်ဆင့်က တံခါးလာဖွင့်ပေး သည် ..။ သန်းထွန်းအောင် သည် ဆင့်ဆင့်ကို ရေရေလည်
လည် အားကုန်လိုးထားတာကြောင့် ပင်ပန်းပြီး အိပ်ပျော်နေ သည် ..။ သူ့ပုဆိုးသည် ခါးအထိ လန်နေတာကြောင့်
လီးတန်ကြီး ကို ဝေေ၀လွင် မြင်နေရ သည် ..။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ၀ိုင်တွေ သောက်လာတာကြောင့် ခပ်ထွေထွေ ဖြစ်
နေသော ဝေေ၀လွင် သည် လင်ဖြစ်သူ ရဲ့ လီးကြီးကို မြင်လိုက်ရသောအခါ သန်းထွန်းအောင် နဲ့ သူမ မလိုးဖြစ်တာ
ကြာနေတာကို သတိ၇သွားပြီး..သန်းထွန်းအောင်လဲ လိုးချင်ရှာမှာဘဲ ဆိုပြီး...သန်းထွန်းအောင်ကို နှိုးလေ သည် ..။
“ကိုအောင်..ကိုအောင် ...ထ.....ထ....ဝေ...ပြန်ရောက်ပြီ ….ထ …..ထ ….”
သန်းထွန်းအောင် လဲ အိပ်ပျော်နေရာက ထ လာ သည် ..။
“ဝေ..ဘာလဲ ..ဝေ ဘာလိုချင်လဲ ...”
ဝေေ၀လွင် က ပြုံးစိစိ နဲ့ ..“ မောင် နဲ့ လိုးကြရအောင် . .” လို့ ပြော သည် ..။…သန်းထွန်းအောင် လဲ ဆင့်ဆင့်နဲ့ သုံးချီတောင် အပြတ်အသတ် လိုးထားခဲ့ပြီးမို့ အရမ်း ပင်ပမ်းနေသလို အားကလဲ ကုန်နေပြီ ..။ ဝေေ၀လွင် ကလဲ သူ့လီး ကိုလာစမ်းသည် ..။ ခါတိုင်းဆိုရင် ..ဒီလို လာစမ်းရင် သူ့လီးတန်သည် ဒိုင်းကနဲမတ်မတ်တောင် သည် ..။ ခုတော့ လီးကြီး သည် ငိုက်ကျနေသည် ..။ ဝေေ၀လွင်က လီးကြီးကို ကွင်းတိုက် ပွတ်သပ်ပြီး ဆွပေး သည် ..။ လီး က ထ မလာ ..။ ဝေေ၀လွင် အံ့သြနေ သည် ..။ သန်းထွန်းအောင် ပန်းသေပြီလား ..။
ပန်းသေ တာတော့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး ..။
ဒါမှမဟုတ် ..သူများနဲ့ လိုးထားလား . .။ ဟင် ….သူ...သူ ...တအားလိုးထားလို့ လီးက ထမလာနိုင်တာလား ..။
ဖြစ်နိုင် သည် ..။ သူ...သူ.....သူ ငါမလာခင် လိုးထားလို့ ဖြစ် မည် . .။
“ ကိုအောင် . . ”
“ ဟင်..ဝေ . .”
“ ကိုအောင် ဘာဖြစ်လဲ ...လီးမထ ပါလား ...”
“ အရမ်းအိပ်ချင်နေလို့ပါ ...”
“ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး..ခါတိုင်းဆို နဲနဲကိုင်တာနဲ့ မတ်နေတဲ့လီး က...”
“ အိပ်နေရာက ရုတ်တရက် ထလိုက်လို့ပါ ..ဝေရာ ..မနက်စောစောထ ပြီး လိုးပေးမယ် ...”
“ တော်ပါပြီ ..ခုလဲ စိတ်မရှိတော့ပါဘူး . . ”
ဝေေ၀လွင် အိပ်လိုက်ပေမဲ့ စိတ်ထဲမှာ သန်းထွန်းအောင် သည် ဆင့်ဆင့်နဲ့များ လိုးနေသလား ဆိုတဲ့ မင်္သကာတဲ့
စိတ် ၀င်သွား သည် ..။
ဆင့်ဆင့်ကလဲ လင်နဲ့ကွဲနေတော့ ဆာချင်ဆာနေနိုင်သည် ..။
အင်း . .အိုးချင်းထား...အိုးချင်းထိ...ကြိုးချင်းထား ကြိုးချင်းညိ ..အနေနီးစပ်ရင် ညိနိုင်သည် ...။
ဆင့်ဆင့် နဲ့ဘဲ ညိတာ ဖြစ် မည် ..။ အခု ထ စွပ်စွဲရင် မပိုင် ဘူး ..။ သေသေချာချာ လက်ပူးလက်ကျပ် မိမှ ဒင်းတို့ မငြင်းနိုင်ဘဲ ငါ နိုင်မည် ...။
ဝေေ၀လွင် သန်းထွန်းအောင် နဲ့ ဆင့်ဆင့် ကို စောင့်ကြည့်မည် လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက် သည် . .။
ဆင့်ဆင့် သည် ဝေေ၀လွင် က ခုတလော သူမနဲ့ သန်းထွန်းအောင်ကို စောင့်ကြည့်နေသလို ထင်မိတာနဲ့ သန်းထွန်း
အောင် နဲ့ ကင်းကင်းနေပြနေသည် ..။ သန်းထွန်းအောင် က ဝေေ၀လွင် အလစ်မှာ ဆင့်ဆင့်ကို လိုးဖို့ ကြံ သည် ..။
ဆင့်ဆင့်က ဝေေ၀လွင် ကြည့်ရတာ မင်္သကာဖြစ်နေပုံရသည် ..ခဏ မလုပ်ကြဘဲ နေကြရင် ကောင်းမည် လို့ သန်း
ထွန်းအောင်ကို ပြော သည် ..။
သန်းထွန်းအောင် လဲ ဆင့်ဆင့်ကို တအိမ်ထဲနေပြီး ဘာမှ မလုပ်ရလို့ လစ်ရင်လစ်သလို ဆင့်ဆင့်ရဲ့ ဖင်တွေကို
ဆုတ်ညှစ် ကိုင်တွယ် သည် ..။ တခါတလေ ဝေေ၀လွင် အိမ်ရှေ့ခန်းမှာ ဖုန်းပြောနေတုံး အိမ်အနောက်ဖေး မှာ ဆင့်ဆင့် ကို အနောက်ကနေ ဘတ်စ်ကားပေါ်မှာ လိုက်ထောက်သလိုမျိုး ဖင်ကြီးတွေကို ထောက်ထားတတ် သည် ။
မလုပ်ဖြစ်တာ ကြလာတော့ မနေနိုင်ကြ..။ တနေ့မနက် သန်းထွန်းအောင် သေးပေါက်ဖို့ အိမ်သာဆီကိုအလာ ဆင့်ဆင့်သည် တောင်မတ်နေတဲ့ သန်းထွန်းအောင် ရဲ့ လိင်တန်ကို စိတ်မထိန်းနိုင်ဘဲ ဆုတ်နယ်လိုက်မိသည် ..။
သန်းထွန်းအောင် က ဆင့်ဆင့် ဖင်တုန်းတွေကိုလဲ တအားဖျစ်ညှစ် ဆုတ်နယ် သည် ..။
ဝေေ၀လွင် အိပ်ခန်းထဲမှာ ရှိနေတုံး အချိန်မှာတောင် သူတို့နှစ်ယောက် ဟန်မဆောင်နိုင်ကြတော့ ..။
ဆင့်ဆင့်က လေသံလေး နဲ့..“ နောက်မှ....နော် ...လို့ တိုးတိုးလေး ပြောကာ စိတ်ကိုထိန်းလိုက်တဲ့ပုံနဲ့ ပြေးထွက်
သွားသည် ..။ သန်းထွန်းအောင် လဲ အိမ်သာထဲဝင်ထိုင်ကာ ကွင်းထု ရပြန်သည် ..။
သွန်းဆု တညလုံး အိပ်လို့မပျော် ..။
ပြင်းထန်နေတဲ့ ကာမစိတ်ကြောင့်ပေါ့ ..။ သူငယ်ချင်း မို့မို့ရှိန် နဲ့ ခုတလော တဏှာအကြောင်းတွေ ဆွေးနွေး...လိင်
ဆက်ဆံတဲ့ ပုံတွေ..ဒီဗီဒီတွေ ကြည့်ဖြစ်ပြီး စိတ်တွေက တအား ထကြွသည် ..။ ယောင်္ကျားတယောက်ရဲ့ လိင်ဆက်ဆံတာ ကို ခံချင်လိုချင်တဲ့ စိတ်တွေ ပြင်းပြပေါ်ပေါက် နေပြီး အိပ်လို့မရဘူး ..။
မို့မို့ရှိန်က အတွေ့အကြုံရှိသည် ..။ ကိုယ့်ဖါသာ အာသာဖြေတာတွေ သွန်းဆု ကို သင်ပေး သည် ..။ အာသာဖြေတာ
နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စာအုပ်တွေ ပုံတွေကို အင်တာနက်မှာ ပြသည် ..။ မို့မို့ရှိန် သည် သူ့အမ၀မ်းကွဲ နိုင်ငံခြားက မြန်မာ
ပြည်ကို ပြန်လာအလည် ယူလာခဲ့ပေးတဲ့ ယောင်္ကျား လိင်တန်အတု တချောင်းကို သွန်းဆု စမ်းသုံးကြည့်ို့ ပေး သည် ။
သွန်းဆု သည် ဒီလိင်တန်အတုကြီးကို မိဘတွေ မသိအောင် တွေ့မသွားအောင် ဖွက်ထားရတာကိုက ရင်ထိတ်သဲဖို
ဖြစ်နေရ သည် ..။ တခါမှတော့ စမ်းမကြည့်ရသေးဘူး . .။ စမ်းမယ်လုပ်လိုက်..ကြောက်စိတ် ၀င်လာလိုက် နဲ့..။
ဒီနေ့ ဝေေ၀လွင်ရော သန်းထွန်းအောင်ရော အလုပ်ပိတ်လို့ သူတို့ ထွန်းမြအောင် နဲ့ ဆွေဆွေတို့ အိမ်မှာ ထမင်း သွား
စားကြ သည် ..။ ဆင့်ဆင့်လဲ လိုက်ခဲ့ပါလားလို့ ဝေေ၀လွင်က ခေါ်ပေမဲ့ ဆင့်ဆင့် လဲ လိုက်မသွား ..။ အိမ်မှာ လုပ်စရာတွေ ရှိနေလို့ မလိုက်တော့ ..။ အ၀တ်တွေ လျော်စရာ လျော်..အိမ်နောက်ဖေး မှာ အ၀တ်တွေ အခြောက်လှန်း
သည် ..။ အိမ်ရှေ့က တံခါးခေါက်သံကြားသည် ..။
အိုး...ဝေေ၀လွင်တို့ ပြန်လာပြီ ..။ မြန်လိုက်တာ ..ဘာလို့ အမြန်ပြန်လာကြပါလိမ့် ..။
ထမိန်ရင်လျား နဲ့ အိမ်ရှေ့တံခါး ဆီ ပြေးလာပြီး ဖွင့်ပေး သည် ...။
သန်းထွန်းအောင် နဲ့ ဝေေ၀လွင်တို့ မဟုတ် ..။
သူမ ယောင်္ကျား ..အမူးသမား ..ကိုဇော်ထိုက် ...ဖြစ်နေသည် ...။ တံခါးကို အမြန်ပြန်ပိတ်ဖို့ ကြိုးစားပေမဲ့ ကိုဇော်ထိုက်
က အတင်းတွန်းဝင်လာသည် ..။ “ ကိုဇော်ထိုက် ...ဘာလို့ဝင်လာတာလဲ ...ထွက်..ရှင် ထွက် ...”
ကိုဇော်ထိုက် ရဲ့ ကိုယ်က အရက်နံ့တွေ တထောင်းထောင်း ထွက်နေသည် ..။ “ ဆင့်ဆင့်..မင်းနဲ့ စကားပြောမလို့”
ဆင့်ဆင့် သူ့ကို တွန်းထုတ်ဖို့ ကြိုးစားသည် ..။
“ ဘာမှ ပြောစရာ မရှိဘူး...ရှင်နဲ့ ကျမ ဇာတ်လမ်းက ပြီးပြီ ...ရှင် အခု ထွက်..”
“ စိမ်းကားလှချည်လား...ဆင့်ဆင့်ရယ်..ကိုယ်က မင်းရဲ့ ယောင်္ကျားပါ...လင်ပါ ...အေးအေးဆေးဆေး စကားပြောကြ
မယ်ကွာ...မင်းကိုလေ...ကိုယ် တအားလွမ်းနေတာ . .”
တွန်းလားဆွဲလား နဲ့ ဆင့်ဆင့် ရင်လျားထားတဲ့ ထမိန်နွမ်းလေး က ရုတ်တရက် ဖြုတ်ကနဲ ပြုတ်ကျ သည် ..။
“ အို ..”
ကဗျာကရာ ဖမ်းဆွဲပေမဲ့ ကိုဇော်ထိုက် က ဆင့်ဆင့်ရဲ့ ဖြူဝင်းဖွံ့ထွားတဲ့ ရင်သားစိုင်တွေကို မြင်လိုက် သည် ..။
ဆင့်ဆင့်နဲ့ ဝေးနေတာကြာပြီ မို့ ကိုဇော်ထိုက် သည် ရင်သားစိုင်တွေကို တွေ့မြင်လိုက်သောအခါ စိတ်တွေ ထကြွ
ပြင်းထန်လာပြီး..ဆင့်ဆင့်ကို အတင်း ၀င်ဖက်လေသည် ..။
“ ဆင့်ဆင့်ရယ်..ဒို့ လိုးကြရအောင် . .”
“ ဘာ..ဘာပြောတယ် ..ရှင် မိုက်ရိုင်းလှချည်လား ..ရှင် လွှတ်စမ်း .ကျမကို ..”
ဆင့်ဆင့်က ရုန်းကန်သည် ..။ ကိုဇော်ထိုက်ကို တွန်းပစ်သည် ..။ ကိုဇော်ထိုက် မူးနေလို့ ပက်လက်လန်ကျသွား သည် ..။ ဆင့်ဆင့် အိပ်ခန်းထဲကို ၀င်ပြေးပြီး တံခါးကို ပိတ်သည် ..။ ပိတ်လို့မရ ..။ ကိုဇော်ထိုက်က သူ့ခြေထောက်နဲ့ ထိုးခံထားလို့ ..။
“ ရှင် ထွက်သွား ..အခုထွက်သွား ...”
ကိုဇော်ထိုက် အတင်းဘဲ ဆင့်ဆင့်ကို ၀င်ဖက်ပြီး ကုတင်ပေါ်ကို ဆွဲလှဲ သည် ..။ဆင့်ဆင့် ထမိန်ရင်လျား ပြေကျပြန်သည် ..။ ကိုဇော်ထိုက် သည် ဆင့်ဆင့်ကို အတင်း နမ်းလိုက် ကိုင်လိုက် နဲ့ ဆင့်ဆင့်က ရုန်းဖယ်လိုက် နဲ့
ကိုဇော်ထိုက်ရဲ့ ပုဆိုးသည် ရုန်းရင်းကန်ရင်းနဲ့ ကြမ်းပေါ်မှာ ကွင်းလုံးပုံကျနေလို့ သူ့လိင်တန်ကြီးသည် ဒစ်ပြဲကြီးနဲ့အသဲယားစရာ တရမ်း၇မ်း ဖြစ်နေသည် ..။ ပြေကျနေတဲ့ ဆင့်ဆင့်ရဲ့ ထမိန်ကို ကိုဇော်ထိုက် အတင်းဆွဲချွတ်ပြီး ဆင့်ဆင့်ရဲ့ တင်းမာလုံးဝန်းတဲ့ ရင်သားစိုင်တွေကို အငမ်းမရဘဲ နမ်းစို့ဖို့ ကြိုးစားလေသည် . .။
“ရှင်..မယုတ်မာနဲ့နော် ..ကျမကို မတရား မလုပ်နဲ့ . .”
ဆင့်ဆင့် သည် ကိုဇော်ထိုက်ကို ခြေနဲ့ကန်ကျောက်ကာ ကုတင်ပေါ်မှ ဆင်းပြေးဖို့ကြံပေမဲ့ ကိုဇော်ထိုက်နဲ့ အားချင်းမမျှ ..။ ကုတင်ပေါ်မှ ဆင့်ဆင့် ကြမ်းပြင်ပေါ်ကို ပြုတ်ကျသည် ..။ အတင်း ထဖို့လုပ်သည် ..။ ကိုဇော်ထိုက်က အပေါ်စီးက တက်ခွထားနေသည် ..။ ဆင့်ဆင့်လဲ ထမိန်ကျွတ်ပြီး ကိုဇော်ထိုက် လိင်ချောင်းကြီးကလဲ သူမ အဖုတ်ကို ပွတ်တိုက်မိနေသည် ..။
ကိုဇော်ထိုက်ရဲ့ လိင်ချောင်းကြီးရဲ့ ထိပ်ပေါက်က ထွက်နေတဲ့ အရေကြည်တွေ ဆင့်ဆင့် ဆီးစပ်မှာ ပေကျံကုန်သည် ။နို့သီးခေါင်းနီညိုညိုလေးတဖက်ကို ကိုဇော်ထိုက် စို့မိသွားသည် ..။ စို့တာနဲ့ သူ့လျာကြီးက နို့သီးခေါင်းလေးကို ကလိတော့တာဘဲ ..။ ဆင့်ဆင့် ကြက်သီးတွေ ဖျန်းကနဲ ထကာ တုန်ခါနေသည် ..။ ဆင့်ဆင့်ပေါင်တန်နှစ်ဘက်ကိုလဲ..ကိုဇော်ထိုက်ဆွဲကားလိုက်ပြီးသူ့လိင်တန်ကို..ဆင့်ဆင့်အဖုတ်ထဲအတင်းထိုးသွင်းသည် ..။
“အို ..လူယုတ်မာ ..ရှင်..ခွေး ..ခွေး ….”
ကိုဇော်ထိုက် က ..“ နင် ဟာငါ့မယား..ငါ့မယား ငါလိုးတာ ဘာဖြစ်လဲ ...” လို့ပြောရင်း သူ့လိင်တန်ကို ထိုးသွင်းသည် ။ ဆင့်ဆင့် သည် အတင်းထုရိုက် ရုန်းကန်နေတဲ့ကြားက ကိုဇော်ထိုက်က သူ့လိင်တန်ကြီးနဲ့ အဖုတ်ထဲ ထိုးထိုးသွင်းတာ ခံနေရ သည် ..။ တချက်မှာ သူ့လိင်တန်ထိပ်ဖူးကြီး သည် အဖုတ်ထဲ မ၀င်ဘဲ အစိကိုချော်ထိုးမိသွားသည် ..။ ကျင်ကနဲ ဆင့်ဆင့် တုန်ခါသွားရဆဲ သူ့ထိပ်ဖူးဒစ်ပြဲကြီး ဗျစ်ကနဲ အဖုတ်ထဲတိုးဝင်လာသည် ..။
“အား ..ခွေးးကောင်ကြီး........မုဒိန်းမကျင့်နဲ့ . . .”
ဆင့်ဆင့် ရုန်းလို့မရအောင် ဆင့်ဆင့်ပေါင်တွေကို ကိုဇော်ထိုက်က သူ့ဒူးတွေနဲ့ဖိထားပြီး လိင်တန်ကို ထိုးသွင်းသည် . .။ လိင်တန်တ၀က်လောက် အဖုတ်ခေါင်းထဲ ၀င်မိသွားသောအခါကိုဇော်ထိုက်သည် အချိန်မဆိုင်းဘဲ ဆက်တိုက် ညှောင့်ထည့်တော့ သည် ..။ ဆင့်ဆင့် သည် အဖုတ်ထဲ လိင်တန်ကြီး တစွတ်စွတ်နဲ့ ဆောင့်ထည့်နေသောအခါ မိန်းမူးကာ တွန်းရုန်းထုရိုက်နေတာတွေ ငြိမ်ကျသွား သည် ..။ အရင်ကလိုးပေးနေကျ လင်ဖြစ်သူရဲ့ လိင်ချောင်းကြီး ရဲ့ အထိအတွေ့ကြောင့် အတွေ့ကို မလွန်ဆန်တော့ဘဲ ကိုဇော်ထိုက် လုပ်သမျှကို ငြိမ်ခံနှေမိတော့ ကိုဇော်ထိုက်လဲ ဆင့်ဆင့် အခြေအနေကို ရိပ်စားမိတာနဲ့ ဆက်တိုက်ဘဲ ခပ်သွက်သွက် ထိုးဆောင့်ပေးလေပြီ .. ။
ဆင့်ဆင့်လဲ ကိုဇော်ထိုက် သူ့ဒူးနဲ့ ဖိမထားတော့ပေမဲ့ မရုန်းကန်တော့ ..။ အတွေ့နောက်ကို ကောက်ကောက်ပါအောင် လိုက်သွားပြီ ..။ ပေါင်တန်တွေကို အစွမ်းကုန်ဖြဲကားကာ ကိုဇော်ထိုက် လိုးသမျှ မျက်စိစုံမှိတ်ပြီး တအင်းအင်း ညည်းကာ ခံနေတော့ သည် ..။
ကိုဇော်ထိုက်လဲ မလိုးရတာ ကြာနေပြီကွာ..လို့ ညည်းငြူရင်း တဖြောင်းဖြောင်း နဲ့ အသားကုန် ဆွဲလေသည် ..။ ဆင့်
ဆင့်လဲ ကောင်းသထက် ကောင်းလာပြီမို့ ..အောက်ကနေပြိး တုံ့ပြန်ကော့ပေး..လာသည် . .။ အရေတွေက တအားရွှဲ
နေသည် ..။ လိင်တန်နဲ့ အဖုတ် အ၀င်အထွက် ဘွပ် ဘပ် ဘွပ်ဘပ် အသံတွေ ဆူညံလာသည် ..။ ဆင့်ဆင့်နို့ကြီး
တွေကို ဆုတ်နယ်လိုက် စို့လိုက်နဲ့ စိတ်တိုင်းကျ ဆောင့်လိုးအပြီး သုတ်ရေတွေ အများကြီး ပန်းထုတ်ခါ ကိုဇော်ထိုက်
ပြီးသွားသည် ..။ဆင့်ဆင့်လဲ အကြိမ်ကြိမ် ပြီးရလို့ စိတ်ထဲ ကျေနပ်နေသည် ..။ ကိုဇော်ထိုက်ကိုလဲ ဘာမှ မပြောတော့။
ကိုဇော်ထိုက် သည် စုတ်ပြတ်ညစ်ပတ်နေပြီး အရက်သောက်စရာလဲ ငွေ ပြတ်လပ်နေတာကြောင့် ဆင့်ဆင့် တစောင်းလေး ဖင်အပြောင်သားနဲ့ အိပ်နေသောအချိန်တွင် ဆင့်ဆင့် ပိုက်ဆံအိတ် ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိသွားပြီး ငွေတထပ်
ကို အိပ်ကပ်ထဲ ထည့ကာ အရက်ဆိုင်ကို ပြေးသွားလေ သည် . .။
ဝေေ၀လွင်နဲ့ သန်းထွန်းအောင်တို့ ပြန်လာသောအခါ ဆင့်ဆင့် သည် နေမကောင်းလို့ ဆိုပြီး အိပ်ခန်းထဲမှာဘဲ အိပ်နေ သည် ..။ ဆင့်ဆင့် စောက်ဖုတ်သည် ကိုဇော်ထိုက် တအားဆောင့်လိုးသွားတာကြောင့် အရမ်း ကျိမ်းစပ် နေသည် . .။ ကိုဇော်ထိုက် တက်လိုးသွားတာကိုလဲ ဆင့်ဆင့် သန်းထွန်းအောင် နဲ့ ဝေေ၀တို့ကို မပြောပြလိုတော့ ။
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ကိုဇော်ထိုက် လိုးသွားလို့ သန်းထွန်းအောင် နဲ့ ပြတ်လပ်နေလို့ ဆာလောင်တောင့်တနေတဲ့ လိုလားချက်တော့ ပြေပျောက်သွားရသည် မဟုတ်ပါလား . .။
“ သန်းထွန်းအောင်...စားကွာ..မင်းကြိုက်တာသိလို့ ဆွေဆွေက ရှယ်ချက်ထားတာ ..”
ဟင်းတွေက စုံသည် ။
ပြည်ကြီးငါး နဲ့ ကန်စွန်းရွက်ကြော် ...ပဲပြား နဲ့ ငါးဖယ်ဟင်း ..သီးစုံပဲကုလားဟင်း..ငါးဖယ်အောင်း ငပိကောင်ကြော် ...။ ဆွေဆွေ ဟင်းချက်ကောင်းတာ အမှန်ဘဲ ..ဝေေ၀လွင် ဆိုရင် ဒီလို မချက်တတ်ဘူး ..။
သန်းထွန်းအောင် သည် မျိုးကြီး အိမ်မှာ ညနေစာ လာစား သည် ..။ မျိုးကြီးနဲ့ ဘီယာ သောက်သည် ..။ ဆွေဆွေက
၀ိုင် သောက်သည် ..။ ရှေးဟောင်းနှောင်းဖြစ် ..ကျောင်းသားဘ၀ က အကြောင်းတွေ ထိုင်စကားပြော ဖြစ်ကြသည် ။
သူတို့ စားသောက်နေတဲ့အချိန် သွန်းဆု အပြင်က ပြန်လာ သည် ..။
“ သန်းထွန်းအောင် ..ကြည့်ပါအုံး . .ငါ့သမီး ..သွန်းဆု..ကြီးမလာဘူးလား . .”
“ဟား..အပျိုမကြီး ဖြစ်နေပြီဘဲ ..အေးကွာ..ကိုယ့်အလုပ်နဲ့ကိုယ် ရုန်းကန်နေကြတာ မင်းတို့ဆီ မရောက်တာတောင်
တော်တော် ကြာသွားပြီ ကိုး . . .”
သွန်းဆု က “ ဆာတယ်..ဆာတယ် ..”ဆိုပြီး သူ့မိဘတွေ နဲ့ သန်းထွန်းအောင်တို့ ထိုင်စားသောက်နေကြသော ထမင်း
စားပွဲ မှာ လာဝင်ထိုင်ကာ စား သည် ..။
သန်းထွန်းအောင် သည် မျိုးကြီး တို့ လင်မယား နဲ့ စကားပြောနေပေမဲ့ သွန်းဆု ကို မသိမသာ ကြည့်မိသည် ။
သွန်းဆု သည် ခါးလောက် ရှည်တဲ့ နက်မှောင်သန်စွမ်းတဲ့ ဆံပင်ရှည်ကြီးနဲ့ မျက်လုံးမွေးထူထူ..မျက်လုံးလှလှ နှာတန်ပေါ်ပေါ်..နှုတ်ခမ်းဖေါင်းဖေါင်းလှလှလေး နဲ့ ဘောလီးဝတ် က အိန္ဒိယ ရုပ်၇ှင်မင်းသမီးလေး တယောက်လိုဘဲချောလှသည် ..။ ခါးတို မြန်မာရင်စေ့ အင်္ကျီအနက်လေး ၀တ်ထားလို့ သူမရဲ့ သေးကျဉ်တဲ့ ခါးလေး နဲ့ အဲဒီခါးလေး
အောက်က ကားဆင်းသွားတဲ့ တင်ပါးကြီးတွေက အိအိဖြိုးဖြိုး နဲ့ ၀တ်ထားတဲ့ အသားအိအိ ထမိန်ကြောင့် ကြည့်မိတာနဲ့ စိတ်တွေ ခြောက်ခြား လာမိရသည် ။ သွန်းဆုရဲ့ အသား က နို့နှစ်ရောင် ၀င်းဖြူနေသည် ..။ မျိုးကြီးရဲ့ သမီး ဒီလောက်လှမှန်း သူ မသိခဲ့ ..။ မျိုးကြီးနဲ့ အပြင်ဆိုင်တွေမှာ အတူတူ ဘီယာအရက် သောက်ရင်း ဆုံခဲ့ကြ
ပေမဲ့ မျိုးကြီး အိမ်ကို သူမရောက်ဖြစ်ခဲ့လို့ မျိုးကြီးရဲ့ မိန်းမဆွေဆွေ နဲ့ သမီး သွန်းဆု ကို မတွေ့တာ ကြာပြီ ။
“သမီး ..အန်ကယ် သန်းထွန်းအောင် လေ..မှတ်မိလား ..ဒက်ဒီတို့ ကျိုက်ထီးရိုး ကို အတူတူ သွားကြတယ် လေ ..”
သွန်းဆု က သန်းထွန်းအောင် ကို တချက်မော့ကြည့်ပြီး ပြုံးပြ သည် ..။
“ မှတ်မိပါတယ် ..”လို့ ပြုံးပြီး ဖြေသည် ..။ သွန်းဆုရဲ့ သိသိသာသာ ရှိလှတဲ့ ရင်မို့မို့ကိုလဲ သန်းထွန်းအောင် သတိပြုမိ သည် ။ ဆွေဆွေ ရော မျိုးကြီး ရော ရုပ်ဖြောင့်..ရုပ်ချောကြတဲ့သူတွေမို့ သူတို့သမီး သွန်းဆု သည် အချောအလှတွေ ပေါင်းစု သွားပြီး ဒီလို အမိုက်စားလေး ဖြစ်နေတာ ဘဲလို့ သန်းထွန်းအောင် မှတ်ချက်ချ သည် ..။
သွန်းဆု သည် စားသောက်ပြီးသော အခါ သူမစားသောက်တဲ့ ပုဂံခွက်တွေကို ဆေးကြောပြီး အတွင်းခန်း ထဲကို ၀င်သွား သည် ..။ သန်းထွန်းအောင် လဲ တုန်ခါသွားတဲ့ သွန်းဆု တင်ပါးလှလှတွေကို တွေ့လိုက်ရ သည် ..။ အင်း..တောတော် မိုက်တာဘဲ . . .။
အိမ်ပြန်ရောက်တော့ ဝေေ၀လွင် က မနက်ဖန် သူ့ရုံးအလုပ်နဲ့ နယ်ကို ရုံးစစ်သွားရမည် လို့ ပြောသည် ..။
သန်းထွန်းအောင် လဲ စိတ်ထဲက ကောင်းတာပေါ့ မိန်းမရယ် ..မင်းသွားနေတဲ့အချိန် ငါ ဆင့်ဆင့်ကို ဖြုတ်နိုင်တာပေါ့ကွာ . .လို့ ပြောနေမိ သည် ..။ ဝေေ၀လွင်ကတော့ သူမရောက်ဖူးသေးတဲ့မြို့ကို ရောက်ရမှာမို့ စိတ်လှုပ်ရှားနေ သည် ..။ သန်းထွန်းအောင်ကိုလဲ..“ ကိုအောင် ပါ ဝေနဲ့ လိုက်ခဲ့ဖို့ကောင်းတယ် ..ကိုအောင်ပါရင် ဝေ ပိုပျော်မှာဘဲ . .” လို့ ပြော သည် ..။ “ လိုက်ချင်တာပေါ့ ဝေ..ကိုယ်က ကြိုမပြောဘဲ အလုပ်က ခွင့်ယူလို့ မကောင်းလို့ပေါ့...” လို့ သန်းထွန်းအောင်က ဝေေ၀လွင်ကို ပြန်ပြော သည် . .။
သန်းထွန်းအောင် က ဝေနဲ့ ၂ရက်တောင် ခွဲနေရမှာ..ကိုအောင်တို့ “ ချစ်”ကြရအောင်လား..ဆိုပြီး ပွတ်သပ်
နမ်းစုတ်ခါ ဝေေ၀လွင်ကို ဖြုတ်ဖို့ကြံပေမဲ့ ဝေေ၀လွင်က မနက်အစောကြီး ခရီးသွားရမှာလေ...ဝေ မလုပ်ချင်ဘူး ..”
ဆိုပြီး တွန်းဖယ်ကာ ငြင်းဆန်လေ သည် ..။
သန်းထွန်းအောင် လဲ လိင်တန်ကြီးမတ် ပြီး သူငယ်ချင်း မျိုးကြီး သမီး သွန်းဆု ရဲ့ လမ်းလျောက်ရင် တုန်ခါ
သွားတဲ့ တင်ပါးလှလှကြီးတွေကို မြင်ယောင်ပြီး ကွင်းတိုက်လိုက်ရ သည် . .။
Posted by bluegyi at 07:41